United Arab Emirates - Ntuziaka maka Expats | Dubai & Abu Dhabi
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at September 27, 2019
Ndị Emirates asaa ahụ
Isi Iyi: https://www.instagram.com/emirates
United Arab Emirates - Nduzi maka Expats. Abu Dhabi bụ onye kachasị ukwuu na obodo asaa ndị nwere mpaghara nke square kilomita 67,340, nke hà ka 86.7 pasent nke mpaghara obodo dum, ewezuga agwaetiti ndị ahụ. O nwere uzo mmiri na-agbasa ihe karịrị kilomita 400 ma ekewa ya maka ebumnuche nchịkwa ya na mpaghara atọ dị mkpa.
Mpaghara mbu metụtara obodo Abu Dhabi nke bụ ma isi obodo ndị isi ala na isi obodo gọọmentị etiti. Sheikh Zayed, Onye isi ala nke UAE bi ebe a. Buildingslọ ndị omebe iwu nke ụlọ ọrụ gọọmentị etiti na-ezukọ na ya, ihe ka ukwuu na ministri na ụlọ ọrụ gọọmentị etiti, ụlọ ọrụ ndị si mba ofesi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke steeti, na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmanụ dị na Abu Dhabi, nke bụkwa ụlọ nke Mahadum Zayed na Higher. Kọleji Nkà na ụzụ.
Nnukwu ihe owuwu gụnyere Mina (Port) Zayed na Abu Dhabi International Airport. Obodo a nwekwara nnukwu ọdịbendị, egwuregwu na ntụrụndụ, ya na Abu Dhabi Corniche nke nwere ihe ịtụnanya, nke na-enye ọtụtụ ụzọ ije na-enweghị ihe ize ndụ, ịgba ịnyịnya, ịgba mwe mwe ọsọ na mgbagharị n'ụsọ osimiri agwaetiti Abu Dhabi. Nkwupụta obodo na-atụkwa ilu n’agha bụkwa ihe na-adọrọ mmasị ebe ebe echekwara ụlọ ochie dịka obere alakụba wee nọdụ ala n'ụzọ nkịtị na ndagide nke ụlọ ọgbara ọhụrụ ndị a na-eme ugbu a.
Mpaghara nke abụọ nke Abu Dhabi, nke a maara dị ka mpaghara Eastern, nwere isi obodo Al Ain. Mpaghara a na-eme nri nwere ọtụtụ ahịhịa ndụ, nwee ọtụtụ ugbo, ogige ntụrụndụ ọha na saịtị ndị dị mkpa. A na - agọzikwa ya site na nnukwu mmiri dị n'ime ala nke na-abanye n'ọtụtụ olulu mmiri. Isi ihe dị na mpaghara a bụ Ain Al Faydah Park, Jebel Hafit, ogige ezumike na Al Hili, Al Ain Zoo na Al Ain Museum. Nke a bụkwa obodo ọdịnala na mmụta na saịtị nke UAE mahadum mbụ, Mahadum UAE, nke gụnyere n'etiti ọtụtụ ikike ya ụlọ akwụkwọ ahụike siri ike. Transportgbọ njem dị n'ime na-eme ka ọfụma nwee ọmarịcha okporo ụzọ ma Al Ain jikọọ na mpụga ụwa site na Ọdụ ụgbọ elu nke Al Ain.
United Arab Emirates - Ntuziaka maka Expats!
Mpaghara ọdịda anyanwụ na UAE
Mpaghara mpaghara ọdịda anyanwụ, ngalaba nchịkwa nke atọ nke masara, nwere obodo 52 ma nwee isi obodo ya Bida Zayed, ma ọ bụ Zayed City. Nnukwu oke ọkụ kpuchiri hectare 100,000 dịkarịa ala, gụnyere karịa nde 20 nde. Akụkụ mmanụ ala ndị dị n'okirikiri dị ebe a, dịkwa ka mmanụ mba kachasị na mmanụ, na Al Ruwais.
Na mgbakwunye na mpaghara ala atọ nke Abu Dhabi enwere ọtụtụ agwaetiti dị mkpa na etiti obodo ahụ gụnyere Das, Mubarraz, Zirku na Arzanah, nso ebe ebe mmanụ mmanụ dị. Ihe ndị dị nso bụ Dalma, Sir Bani Yas, Merawah, Abu al-Abyadh na Saadiyat, tinyere ọtụtụ agwaetiti ndị ọzọ.
Ndị Emirate nke Dubai gbagoro n'akụkụ oke osimiri Arab Gulf nke UAE ihe dị ka kilomita 72. Dubai nwere mpaghara c. Mpaghara xNUMX square, nke ya na 3,885 pasent nke mpaghara ala dum, ewezuga agwaetiti ndị ahụ.
Obodo Dubai A rụrụ n'akụkụ akụkụ nke warara nke 10-kilomita dị ogologo, ikuku na-efe efe nke na-ekewa mpaghara ndịda Bur Dubai, obi ọdịnala obodo, site na mpaghara ugwu nke Deira.
Ọfịs onye na-achị achị, ya na ọtụtụ isi ụlọ ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ, Port Rashid, ụlọ ahịa Dubai World, kọstọm, ọdụ mgbasa ozi na ikike nzipu ozi nọ na Bur Dubai. Deira bụ ụlọ ahịa azụmahịa na-aga nke ọma nwere nnukwu ụlọ ahịa azụmaahịa, ahịa, ụlọ oriri na ọ Airportụ Dubaiụ na ọdụ ụgbọ elu mba Dubai. Njikọ Al Maktoum na Al Garhoud jikọtara Bur Dubai na Deira, yana ọwara Al Shindagha nke na-agafe mmiri.
Jebel Ali, ebe obibi nke nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri mmadụ mebere, nwere mpaghara azụmaahịa kachasị ukwuu na Arabia ụlọ na-eto eto ụlọ ọrụ ụwa niile na-eto eto nke na-eji mpaghara mpaghara maka n'ichepụta yana ebe mgbazigharị.
Osimiri Jumeirah bụ nnukwu ebe njem nlegharị anya nke nwere ọtụtụ onyinye pụrụ iche na-emeri ụlọ oriri na ọ facilitiesụ andụ na ụlọ egwuregwu.
N'ime obodo, obodo Hatta bụ ugwu ntụrụndụ bụ ebe mara mma nke ukwuu. N'akụkụ ọdọ mmiri, a na-edobe Hatta Fort Hotel na mbara ala ma na-enye ezigbo ntọala maka ịgagharị agagharị na ugwu ndị dị nso, nke ruru n'ókèala Omani.
Emirate nke Sharjah gbatịrị agbagoro anya na 16 kilomita nke UAE's Coast Coast Coast na ihe karịrị 80 kilomita n'ime ime. Na mgbakwunye, enwere akwụkwọ aha atọ dị na Sharjah nke dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ, nke dị n'akụkụ Ọwara Oman. Ndị a bụ Kalba, Khor Fakkan na Dibba al-Husn. Ndi-isi nwere mpaghara nke kilomita nke 2,590, nke ya na 3.3 pasent nke mpaghara obodo dum, ewezuga agwaetiti ndị ahụ.
Isi obodo Sharjah, nke lekwasịrị anya na Arab Arab, nwere isi nchịkwa na azụmahịa yana nnukwu ọrụ ọdịnala na ọdịnala dị egwu, gụnyere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie. Ihe ala di iche bu ihe abua ahu ekpuchita nke oma, ndi n’egosiputa usoro iwu ndi Islam; ọtụtụ ebe ntụrụndụ na ogige ọha na eze dịka Al Jazeirah Fun Park na Al Buheirah Corniche. Obodo ama ama na ya maka ọtụtụ ụlọ alakụba mara mma. Ọ bụ Sharjah International Airport na Port Khalid na-enye njikọ na ụwa mpụga.
Sharjah bukwara ebe ụfọdụ mmiri gbara gburugburu, nke a kacha mara amara aha ya bụ Dhaid ebe a na-akọ ahịhịa na mkpụrụ dị iche iche n'ala ya nke bara ụba ma na-eme nri. Khor Fakkan na-enye Sharjah nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri ọwụwa anyanwụ. Agwaetiti abụọ dị n'ụsọ mmiri bụ Sharjah, Abu Musa, nke nọrọ n'okpuru ndị agha site na Iran kemgbe 1971, na Sir Abu Nu'air.
Ajman, nke dị nso n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke isi obodo Sharjah, nwere ebe mara mma nke osimiri 16-kilomita nke mara mma. Ọ bụ obere ọkwa obodo n'ihe banyere oke ahụ ya, kpuchie ihe dịka square kilomita 259, nke ya na 0.3 pasent nke mpaghara obodo dum, ewezuga agwaetiti ndị ahụ.
Isi obodo, Ajman, nwere ụlọ akụkọ ihe mere eme na etiti ya. Emezigharịrị nke a n'oge na-adịbeghị anya ma ugbu a bụzi ebe ngosi nka na-adọrọ mmasị. Na mgbakwunye na ọfịs Ruler, ụlọ ọrụ dị iche iche, ụlọ akụ na ebe azụmahịa, a na-agọzikwa ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri eke Port Port nke Ajman. Masfut bụ obodo na-arụ ọrụ ugbo nke dị na ugwu 110 kilomita site na ndịda ndịda obodo, ebe mpaghara Manama dị ihe dị ka kilomita 60 n'ebe ọwụwa anyanwụ.
Emirate of Umm Al Qaiwain, nke nwere oke osimiri gbara gburugburu ruo kilomita 24, dị na Arab Gulf Coast nke UAE, n'etiti Sharjah na ndịda ọdịda anyanwụ, yana Ras al-Khaimah na ndịda. Ókè-ala-ala-ya di kwa ihe dika kilomita 90 nke 32 site na mpaghara ala mmiri. Gburugburu ala obodo ahụ dị ihe dị ka square kilomita 777, nke ya na 1 pasent nke mpaghara obodo dum, ewepu agwaetiti ndị ahụ.
Obodo nke Umm Al Qaiwain, isi obodo onye nwe obodo, di na onodu ubochi di nkpa nke nebute kilomita 90m n'ogologo site na kilomita 1. Ọfịs onye na-achị achị, ụlọ ọrụ nchịkwa na azụmahịa, ọdụ ụgbọ mmiri bụ isi na ebe a na-ahụ maka azụlite ebe nri na azụ dị ebe a. Obodo ahụ nwekwara ihe e chekwara echekwara nke ụlọ ochie, ọnụ ụzọ mbata ya na-agba ya gburugburu.
Falaj al-Mualla, ihe osisi okike mara mma dị, dị na 50 kilomita ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ nke obodo Umm Al Qaiwain. Agwaetiti Sinayah, nke dịdebere ebe dịpụrụ adịpụ site n'akụkụ mmiri nwere mpaghara mangove dị mkpa yana yana usoro ozuzu nke Socotra cormorant.
Ras Al Khaimah, onye kasị dị ka ugwu na ugwu ọdịda anyanwụ nke UAE, nwere oke osimiri dị ihe dị ka 64 kilomita n'akụkụ Ọwara Arab, nke na-eme ka ala na-eme nri, na-enwe akwụkwọ ozi dị iche n'etiti obi nke ugwu Hajar na ndịda ọwụwa anyanwụ. Akụkụ abụọ nke Emirate na-ekere òkè na Sultanate nke Oman. Na mgbakwunye na mpaghara ala ya, Ras Al Khaimah nwere ọtụtụ agwaetiti tinyere ndị nke Greater na Nta ka obere, nke Iran biri kemgbe 1971. Mpaghara ala obodo ahụ bụ square kilomita 168, nke ya na 2.2 pasent nke mpaghara obodo dum, ewezuga agwaetiti.
Obodo Ras Al Khaimah kewara abụọ site n’aka Khor Ras Al Khaimah. Na mpaghara ọdịda anyanwụ, nke a maara dị ka Old Ras Al Khaimah, bụ Ras Al Khaimah National Museum na ọtụtụ ngalaba gọọmentị. Akụkụ ọwụwa anyanwụ, a maara dị ka Al Nakheel, nwere ụlọ ọrụ Ọchịchị, ọtụtụ ngalaba gọọmentị na ụlọ ọrụ azụmahịa. Akụkụ abụọ ahụ jikọtara site na nnukwu àkwà mmiri e wuru n'ofe khor.
Khor Khuwayr bụ mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ihe dịka 25 kilomita n'akụkụ ebe ugwu nke Ras Al Khaimah obodo. Na mgbakwunye na nnukwu ụlọ ọrụ simenti, gravel na marble, ọ bụkwa ebe maka Port Saqr, ọdụ ụgbọ mmiri maka ndị isi obodo na mpaghara azụmaahịa ọdịnala Rams. N'aka nke ọzọ, mpaghara Digdagga bụ mpaghara ọrụ ubi ama ama ma nwee ụlọ ọrụ ọgwụ Julphar, nke kachasị ukwuu na Ọwara Arab.
Ebe ndị ọzọ dị mkpa dị na isi obodo ahụ gụnyere: Al-Hamraniah, mpaghara ebe ọrụ ugbo na ebe maka Ras Al Khaimah International Airport, Khatt, ebe ndị njem ama ama maka isi iyi ọkụ ya, Masafi nke ama ama maka ahịhịa na isi iyi ya. na Wadi al-Qawr, ndagwurugwu mara mma na ugwu ndịda.
Ewezuga obere akwụkwọ ozi dị na Sharjah, Fujairah bụ naanị ọdụ ụgbọ mmiri nke dị n'akụkụ Ọwa Oké Osimiri. Oke osimiri ya kariri kilomita 90 n’ogologo ya na ebe dị mkpa esiwo rụọ ọrụ dị mkpa na mmepe ya. Mpaghara ala obodo ahụ bụ square kilomita 1165, nke ya na 1.5 pasent nke mpaghara obodo dum, ewezuga agwaetiti.
Obodo Fujairah, isi obodo nke ndi ochichi, bu ulo oru mmepe ngwa ngwa nke nwere ulo oru ndi isi, ndi isi ochichi, otutu ulo oru ahia na otutu ulo ahia, tinyere ebe ugbo elu na Port nke Fujairah bu otu n’ime ebe ndi mmadu no mmanu mmanu nke uwa. ọdụ ụgbọ mmiri.
A na-ahụ ihe ngosi anụ ahụ nke ugwu ahụ bụ ugwu jigide Hajar nke na-emebi oke ala na-eme nri nke ọma ebe ọtụtụ ebe emerela. A gọziri Fujairah nke nwere ihe ngosi dị egwu, ọ ga-aga n'ihu na-ewu ụlọ na azụmahịa ya. Ebe nkiri gụnyere ụfọdụ ebe mmiri mmiri mara mma, mma okike nke ugwu na ala dị n'ụsọ mmiri, ebe ọdịnala na akụkọ ihe mere eme na, n'ezie, anwụ anwụ nwere ike ịdabere na ya.
Obodo akụkọ ihe mere eme nke Dibba al-Fujairah, na njedebe nke ugwu obodo ahụ, bụ ebe dị mkpa maka ọrụ ugbo na azụ, ebe obodo Bidiya nwere ụlọ alakụba nwere ụlọ anọ pụrụ iche bụ nke kacha ochie na obodo ahụ.
Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ịdenye aha gị Ụlọ ọrụ Dubai City
N'okpuru usoro gọọmentị UAE, otu ndi a maara dị ka ndị isi oche nke ndị ọchịchị na-ahọpụta Onye isi ala ahụ. Kọmịshọn Kasị Elu bụ ọgbakọ kacha emebere iwu na UAE, a na-ahọpụtakwa Onye isi ala na Onye isi ala na ndị otu ya maka afọ ise ga-emegharị mmegharị.
Supremelọ ikpe Kasị Elu nwere ikike omebe iwu na ndị isi. Na mgbakwunye na ịhazi na ịnakwere iwu gọọmentị etiti, Councillọikpe Kasị Elu kwadoro Onye isi ala nke Onye isi ala họpụtara ma kwadebere ịnabata arụkwaghịm ya ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Onye isi ala họpụtara Prime Minista. Mgbe ahụ, ọ họpụtara Council nke Ndị Ozi, ma ọ bụ Cabinet, iji lekọta mmepe na mmejuputa iwu gọọmentị etiti n'ofe niile nke gọọmentị.
Na mgbakwunye na kansụl Kasị Elu na Council nke Ndị Ozi, otu ndị ome iwu 40 a maara dị ka Federal National Council (FNC) na-enyochakwa atụmatụ iwu ọhụụ ma na-enye ndụmọdụ na UAE Cabinet, dị ka achọrọ. E nyere FNC ikike ịkpọ na juo ndị Minista ajụjụ gbasara arụmọrụ nke ha, na-enye ọkwa ọzọ maka ịza ajụjụ na sistemụ ahụ. Mmepe nke ala iji mepee mkpebi bụ emere na December 2006, na ntuli aka izizi nke ndị otu FNC. Na mbu, ndị otu FNC bụ ndị Ọchịchị na-achị Emirate họpụtara.
Isi Iyi: Emirates Pintrest
Mmeghe nke ntuli aka na-ezighi ezi na-anọchite anya mmalite nke usoro iji mee ka usoro ochichi nke UAE dị ọhụrụ. N'okpuru ndozigharị ndị a, ndị ọchịchị n'otu n'otu na-ahọrọ kọleji ntuli aka nke ndị otu ha jikọtara 100 ugboro ole ọnụ ọgụgụ ndị otu FNC nke Emirate ahụ nwere. Ndị otu kọleji ọ bụla ahọpụtara ọkara nke ndị FNC, ebe ọkara nke ọzọ ka na-ahọpụta Onye Ọchịchị ọ bụla. Usoro a rụpụtara FNC ebe otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndị otu nọ na ya bụ ụmụ nwanyị.
Atụmatụ ọdịnihu ga-atụ anya ịbawanye nha nke FNC ma mee ka mmekọrịta dị n'etiti ya na Council nke Minista dịkwuo mma, iji mee ka arụmọrụ nke gọọmentị na UAE siri ike. Na Nọvemba 2008, a na-agbatịkwu usoro maka ndị otu FNC site na afọ abụọ ruo afọ anọ, nke kwekọrọ na ndị omeiwu ndị ọzọ n'ụwa. Na mgbakwunye, gọọmentị ga-akọtara FNC banyere nkwekọrịta na nkwekọrịta mba ụwa chọrọ, ndị FNC ga-atụle mkparịta ụka ndị ahụ tupu ha akwado nkwado ha.
N’akụkọ, obodo ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke UAE ka e gosipụtara na ọ nwere nnukwu mmetụta maka onye ndu obodo na ụlọ ọrụ gọọmentị. Nke a bụ n'ụzọ nzaghachi maka uto na mmepe ngwa ngwa nke UAE enwetawo n'okpuru nduzi ha n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya.
Akuko UAE na Ihe Nketa
Mmadu abanyela ala a maara ugbu a dị ka United Arab Emirates (UAE) ruo ọtụtụ narị puku afọ na, n'ezie, mpaghara ahụ nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa na Mbugharị mbụ nke mmadụ si Africa pụọ ​​na Asia gaa Asia. Ka oge na-aga, gburugburu ebe obibi gbanwere nke ukwuu. N'ihe dị ka afọ 7500 gara aga, ihu igwe adịghị mma ma nweekwa ihe akaebe doro anya banyere ọrụ mmadụ, mana ihe dịka 3000 BC ọnọdụ etoola mmiri, n'ihi nsonaazụ a na-akọkarị ọrụ ugbo.
E guzobere azụmaahịa sitere na mbido wee bute ọla kọpa site na ugwu Hajar gaa n’obodo mepere emepe na mbido 3000 BC, ebe esi ebufu ya na Mesopotamia. Zọ ndị njem si kamel gafere site na mpaghara site na north ruo na ndịda nyekwara ụzọ ọzọ na India. Ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị ka Julfar (Ra's al-Khaimah) mechara ghọọ ụlọ ọrụ na-abawanye uru, na-ekelerịrị ahịa ahịa mkpụrụ osisi ahụ.
Na narị afọ nke iri na isii, ọbịbịa ndị Portuguese na Ọwara kpatara nnukwu ọgba aghara maka ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ dịka Dibba, Bidiyah, Khor Fakkan na Kalba. Ma na mmalite nke narị afọ nke iri na itoolu, otu agbụrụ mpaghara, ndị Qawaisim, emeela ọtụtụ ụgbọ mmiri karịrị iri isii na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri 20,000 - zuru oke iji kpasuo mkpamkpa ndị Britain iji gbochie ụzọ azụmaahịa ahịa n'oké osimiri dị n'etiti Ọwara na India.
Source Souks nke Old Dubai
Ka ọ na-erule oge 1790s, obodo Abu Dhabi abụrụla nnukwu ụlọ mkpụrụ osisi dị mkpa nke na onye ndu nke ebo Bani Yas, onye-isi nke Al Bu Falah (ụmụ ya, ndị Al Nahyan, bụ ndị isi nke Abu Dhabi ugbu a), therefọdụ kilomita site na 150 gaa n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ. Afọ ole na ole mgbe e mesịrị, ndị otu Al Bu Falasah, ngalaba ọzọ nke Bani Yas, biri n'akụkụ Osimiri Dubai, ebe ha ka na-achị achị taa dị ka ezinụlọ Al Maktoum.
Azụ Pearl nọgidere na-eto eto, ma emesịa Agha Worldwa Mbụ, ndakpọ akụ na ụba nke 1930s, na ihe ndị Japan mepụtara banyere paịlị emeela ka ahia ahụ belata - na-enwe mmetụta dị njọ na akụ na ụba mpaghara.
Site na 1950s, bu nchoputa nke mmanu, na na 6 August 1966, Ebube Ya (HH) Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ghuru Onye ochichi nke Abu Dhabi. Otu a wee bido oge nnukwu atụmatụ na mmepe siri ike, nke Abu Dhabi, na ndị UAE n'ikpeazụ, malitere ijide ụwa ndị ọzọ n'ihe gbasara mmegharị na ike akụ na ụba. Na 2 Disemba 1971, e hiwere otu iwu nke steeti isii amara dị ka United Arab Emirates. Nke a mejupụtara Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, na Fujairah. A họọrọ Sheikh Zayed ka ọ bụrụ Onye isi ala na HH Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, Onye Ọchịchị nke Dubai, dị ka osote onye isi ala. Ọchịchị nke asaa, Ra's al-Khaimah, sonyeere Federation na 1972.
Obi abụọ adịghị ya na ọganihu, nkwekọ na mmepe nke oge a nke e ji mara UAE ugbu a, ruru nke ukwuu, n'ihi oke ọrụ nna nna malitere mpaghara. Na 2004, Sheikh Zayed bụ onye isi UAE na dịka Onye Ọchịchị nke Abu Dhabi site n'aka ọkpara ya, HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Principleskpụrụ na nkà ihe ọmụma ọ wetara na gọọmentị, ka dị n ’obi nke Federation na usoro iwu ya taa. Mgbe ọnwụ nke nwanne ya nwoke, Sheikh Maktoum, na 2006, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Onye Ọchịchị nke Dubai ka a họpụtara dịka Onye isi oche UAE na Prime Minista.
Ebe e si nweta ya: UAE2010 Yearbook - UAE National Media Council
Onye isi ochichi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke UAE na-arụ ọrụ n'ime nnukwu usoro iwu mba ofesi guzobere site na Onye guzobere President nke Federation, HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Uzo a mesiri diplomasi, mkparita uka na obi ọmiko. UAE na-echebara mbọ ya niile maka ndị agbata obi ya na mba ụwa niile anya gbasara udo, nkwụsi ike na nchekwa maka mmadụ niile. Iji mezuo ebumnuche ndị a, o jirila ebumnuche bulie àkwà, mmekọrịta na mkparịta ụka. Elydabere na ngwa ọrụ ndị a enyerela gọọmentị aka ịchụso mmekọrịta dị mma, nke ziri ezi na nke sara mbara na mba ụwa.
Guidkpụrụ nduzi nke amụma mba ofesi UAE bụ nkwenye na mkpa nke ikpe ziri ezi na mmekorita mba na mba n'etiti steeti, gụnyere mkpa ọ dị ịkwanyere ụkpụrụ nke itinyeghị aka na ihe niile dị na mba ndị ọzọ. UAE na-agbakwa mbọ iji dozie esemokwu udo, wee kwado ụlọ ọrụ mba ụwa iji mee ka ọchịchị nke iwu mba ụwa dị na mmejuputa iwu na nkwekọrịta dị.
Otu n'ime ihe dị mkpa dị na amụma mba ofesi UAE bụ mmepe nke mmekọrịta chiri anya ya na ndị agbata obi ya na mpaghara Arab Peninsula site na ngalaba ọgbakọ isii na-emekọ ihe ọnụ na Gulf (GCC). N'oge 2009, mmepe na Palestine, Iraq, Iran, Yemen, Afghanistan na Pakistan na ebumnuche ndị a chọrọ iji mesoo ha mebere isi mkparịta ụka nke UAE na ndị isi ụwa. Ndi UAE arara onwe ha nye udo, nchekwa na nguzosi ike na mpaghara Arab, yana idozi nmekorita nke mmekorita n'etiti mba niile, na ezigbo uzo na-adigide maka esemokwu Middle East. O kwenyere na enweghi ike nweta udo ebe ọrụ Israel na Palestine na ala ndị Arab ndị ọzọ na-aga n'ihu. Ọ kwadoro njedebe nke Israel na nguzobe nke ala Palestine nwere onwe ya, yana East Jerusalem dị ka isi obodo ya, n'etiti usoro nkwekọrịta dabere na Arab Peace Initiative.
UAE arịọla mba ụwa ugboro ugboro ka ha mezie owuwu nke ndị Juu na West Bank na Jerusalem na ntinye aka ịgbake usoro udo nke Middle East. Ka ọ dị ugbu a, ọ katọrọ oke iwe nke Israel na Gaza ma gosipụta ịdị n'otu n'etiti ndị Palestian ndị agha ahụ metụtara. Ndi UAE enyela ihe ruru Dh11 ijeri (US $ 3bn) na enyemaka maka Palestinians, tinyere ego mmepe maka akụrụngwa, ụlọ, ụlọ ọgwụ na ọrụ ụlọ akwụkwọ. Na mgbakwunye, mba ahụ nyere onyinye nde DH638.5 (US $ 174mn) maka iwughari ya na Gaza.
UAE abụrụla onye na-akwado ọrụ nke gọọmentị Iraq ma na-agba ume ka a kwanye ugwu maka Iraq ókè, ọbụbụeze ya na nnwere onwe ya. Ndi otu nwere otu n’ime ndi nnochite anya nke ndi Arab n’agha na onye nnọchi anya ndi bi na Baghdad, ma kagbuo ụgwọ o kwesiri ruru ijeri Dh25.69 (US $ 7bn) iji kwado mbọ ndị Iraq na-ewughachi. N'agbanyeghị esemokwu were ogologo oge nke ya na Iran maka ajụjụ banyere agwaetiti atọ nwere UAE ma nwee nchegbu banyere mmemme nuklia Iran, UAE emeela ka ụzọ mepere emepe na-ewuli elu nke nwere ike ibute usoro maka inwe ntụkwasị obi na mkpebi udo niile. mbipụta pụrụ iche. Ndi otu a gara n'ihu na-atinye ntinye aka na mbọ mba nile na-eme iji kwusi Afghanistan ma kwado nkwado ya iji weghachi nchekwa. O nyere US $ 550 nde na enyemaka ndị mmadụ na mmepe n'etiti 2002 na 2008 ma ọ bụ naanị mba Arab na-arụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ala na Afghanistan.
Na agbanye mpaghara ahụ n'onwe ya, amụma mba ofesi UAE gara n'ihu na-emezigharị iji nabata mgbanwe na-ebilite na mpaghara ụwa. Dika akuku uzo ya, o na ewulite mmekorita ya na obodo ndi mepere emepe ma ndi na etoolite etoolite ma na-ewusi mmekorita ya na ndi ozo ya na West. Otu akụkụ dị mkpa nke amụma mba ofesi UAE na-etinye nnukwu nkwalite na ịkwalite mgbasawanye nke njikọ azụmahịa na itinye ego na obodo na ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'ụwa niile. Ọnọdụ ngwa ngwa nke Federation dị ka isi ego maka mpaghara mpaghara Middle East emeela ka ọ dịkwuo ike ma mee ka ọnọdụ ya dị ka onye otu mba ụwa zuru ụwa ọnụ sie ike.
N'ihi na Eshia nwere nsogbu ọnọdụ akụ na ụba n'oge na-adịbeghị anya karịa akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, enwere ọtụtụ ihe gosiri na ụfọdụ n'ime mba ndị isi Eshia ga-arụ ọrụ dị egwu n'ụwa. ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'itinye mgbanwe a, yana igosipụta agụụ ime ka njikọta mmekọrịta sikwuo ike, ndị isi UAE nọgidere na-azụlite mmekọrịta ya na ọtụtụ mba Eshia, gụnyere China na India. Otu nnukwu ihe ịga nke ọma na diplọma n'oge 2009, nke gosipụtara ọkwa mba ya na-eto, bịara mgbe a họọrọ Abu Dhabi ka ọ nọrọ n'ụlọ ọrụ nke International Renewable Energy Agency (IRENA).
UAE ebipụtala akwụkwọ iwu maka ike nuklia maka ndị nkịtị, jiri mesie usoro iwu ya ike na ịdị njikere ịgbaso usoro nchekwa na nchekwa niile metụtara. Ka ọ dị ugbu a, Kọmitii Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ike Atomic nke mba ụwa kwadoro nkwado nke usoro nyocha nke nuklia a maara dị ka Protocol ọzọ, nke na-agba mbọ na Nkwekọrịta Nkwekọrịta Nuclear. Akụkụ ọzọ dị mkpa na nkwado nke UAE bụ n'ọgụ zuru ụwa ọnụ megide iyi ọha egwu, gụnyere ụjọ nke gọọmentị na-akwado.
N'agbanyeghị mmetụta nke nsogbu ego na nke akụ na ụba na mpaghara akụ na ụba na ọrụ mmepe, UAE gara n'ihu na mmemme enyemaka mmadụ, enyemaka na mmepe mmepe n'ọtụtụ mba. Onye odeakwụkwọ UN bu Ban Ki-moon nabatara mbọ ya na nkwanye ugwu a, onye toro oke maka ọrụ ọdịmma mmadụ ya ma rụọ ọrụ iji belata nhụjuanya nke ndị mmadụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa n'oge ọdachi na ọgba aghara ụmụ mmadụ.
A na - ahazi ngwa agha site na otutu ndi isi, dika Abu Dhabi Fund for Development nke, n'oge 2009, oru ndi akwadoro na Morocco, Burkina Faso, Tanzania, Bangladesh, Palestine, Benin, Yemen, Afghanistan, Sudan, Eritrea na ndi ozo; Ndị na - ahụ maka ụlọ ọrụ Red Crescent (otu n'ime ndị otu iri kachasị elu nke Kọmitii Mba Nile nke Red Cross), ndị ọrụ ha kachasị arụ ọrụ gụnyere ịnye mmiri ọ inụ drinkingụ na mba ụnwụ nri na ala ịkpa mmiri kpara aka, ịkwadebe ụlọ ọgwụ na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ nke mba ndị dara ogbenye. lekwasịrị anya karịsịa na ọzụzụ ụmụaka nọ na mba ndị dara ogbenye. Na mgbakwunye, Noor Dubai, ọrụ enyemaka mba ụwa maka igbochi na ọgwụgwọ nke ìsì na ọhụhụ dị ala, na-akwado òtù Ahụ Ike Worldwa na thelọ Ọrụ Mba Nile Maka Mgbochi Ìsì. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ihe e mesiri ike bụ enyemaka enyemaka maka ndị ọdachi ma ọ bụ ọgba aghara na ịda ogbenye metụtara.
Na mkpokọta, n'ime afọ iri atọ na ọkara gara aga, UAE enyela ihe karịrị ijeri Dh255 (US $ 69.4 bn), na mgbazinye ego, enyere ego na enyemaka dabere na gọọmentị gọọmentị, gọọmentị Federation bụkwa onye enyemaka dị ukwuu na ụlọ ọrụ mba ụwa, na-emela ijeri DH100 (US $ 27 bn) site na International Monetary Fund na World Bank. Officelọ Ọrụ Mgbakwunye Ego nke UAE, nke e guzobere na UN Office maka Nchịkọba Banyere Ọha na Ọha, bụ nnọkọ nkwalite na nso nso a nke ga-eduga na Federation itinye aka na ntinye aka na ọtụtụ, kama ilekwasị anya na nkwado site na njikọkọ ọdịnala ọdịnala. pụtara.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na UAE dị ugbu a n'ọnọdụ nkwụghachi ike, nsogbu akụ na ụba ụwa na-adịbeghị anya metụtara ya n'ụzọ dị ukwuu. Agbanyeghi uzu mbu nke emere site na onu ahia mmanu di elu, oria nke etiti mba uwa mere ka nsogbu nke mmanu ghara irighari ihe dika otu uzo ato n’ime onu ogugu nke July 2008. Mgbanwe nke nnukwu nnubata nke isi obodo kpatara ọdịda dara n'ọdịda nke ahịa ngwaahịa. Ọzọkwa, mwepu nke ụlọ ọrụ na akụrụngwa, ụzọ kachasị maka mgbasawanye akụ na ụba UAE, pụtara na uto na 2009 belata nke ọma site na afọ ndị gara aga. N'October 2009, Ministri nke Economy buru amụma uto nke naanị 1.3 pasent maka afọ.
Mkpụrụ fig maka 2009 dị iche na nke 2008, mgbe uto na UAE akwa ụlọ (GDP) ruru 7.4 pasent. Nduzi mbilite ahụ bụ mpaghara mmanụ na gas, nke gbasawanyere site na 35.6 pasent, n'ihi mmụba nke ọnụahịa mmanụ. Akụkụ ndị ọzọ toro eto na 2008 gụnyere ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ (26.1 pasent), ụlọ ọrụ na-emepụta ihe (17.2 pasent), ngalaba akụ na ụba (15.9 pasent), azụmaahịa azụmaahịa na ọrụ mmezi (18.7 pasent), na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ahia ụlọ oriri na nkwari akụ (15.1 pasent).
Na 2008, nguzozi ahia UAE mụbara site na 35.3 pasent, site na Dh170.85 ijeri (US $ 46.5 bn) na 2007 ruo Dh231.09 ijeri (US $ 62.9), n'ihi ihe dị ukwuu na pasent 33.9 dị elu na uru nke mbupụ na mbupụ na 39.7 pasent bilitere na uru nke mbupụ mmanụ, yana ọnụego 37.1 pasent na-abawanye na uru nke mbupụ gas. Mpaghara azụmaahịa kwụụrụ ahịa hụrụ mgbago 16.4 pasent karịa na mbupụ, nke ruru DH97.46 ijeri (US $ 26.6 bn) na 2008. Ka ọ dị ugbu a, ibubata rute ruru ijeri DH XXX (US $ 345.78 bn); ịrị elu nke 94.2. Ebili na mmelite nke ụlọ n'ihi mmụba nke ọnụ ọgụgụ mmadụ na ọkwa ego, yana uto dị mma na azụmaahịa mbupụ, nyere aka kwalite uru nke mbubata site na 33.4 pasent iji rute Dh33.4 ijeri (US $ 735.70 bn).
Onu oriri na ọnwa iri na otu nke 2009 guzoro na 1.7 pasent-gbadata nke ukwuu site na afọ ndị gara aga. Ọnụ ego ụlọ ala dị ala na ọnụ ahịa nri nyere aka na nrụgide nrụgide na akụ na ụba. Na 2008, onu oriri guzoro na 10.8 pasent, n'ihi na nnukwu ego sitere na ọnụahịa mmanụ dị elu na-eme ka akụ na ụba dịkwuo elu, na-ekepụta ụkọ ihe onwunwe na ọrụ. N'otu oge ahụ, dollar US na-esighi ike na ọnụ ahịa nri ụwa dị elu mere ka ibubata ihe dị ọnụ. Iwu UAE Central Bank kwuputara kemgbe idobe ọnụego ọmụrụ nwa na ọkwa dị ala iji tụgharịa mmepe akụ na ụba.
Ulo oru na iche
Akụkụ ndị na-abụghị hydrocarbon gbagoro 63 pasent nke GDP na 2008, n'agbanyeghị ọnụahịa mmanụ na gas dị elu, na-atụnye ụtụ DH XXX (US $ 2.16 bn) na akụ na ụba. UAE na-ele anya belata ntinye aka nke hydrocarbons ihe dị ka 590 pasent n'ime afọ iri na-esote ruo 20 afọ site na ịkwalite uto ọzọ na akụ na ụba. Manufactlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-abụ akụkụ dị mkpa nke ebumnuche Federation maka mgbanwe akụ na ụba, na-ewukwasị akụkụ ndị dị ugbu a dị ka nzere aluminom, ceramik na ọgwụ.
Na 2009, Abu Dhabi kpughere 2030 Economic Vision, na-esetịpụ maapụ ụzọ maka mmụba akụ na ụba ka ukwuu. Developmentlọ ọrụ mmepe nke Mubadala, ngalaba atụmatụ akụ na ụba nke gọọmentị Abu Dhabi, na-akwụ ụgwọ dị ukwuu na mmepe ụlọ ọrụ mpaghara, gụnyere ọrụ na mmezi nke ikuku (mmezi nke ikuku ụgbọ elu), usoro azụmahịa, ike na oge ezumike. Abu Dhabi na-elekwasịkwa anya na isi mmalite nke ike na ụlọ ọrụ gọọmentị nwere ọdịnihu ike Masdar bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ a. Masdar City, nke ụlọ ọrụ ahụ kọwara dị ka 'obodo mbu carbon na-anọpụ iche efu ụwa na isi ụlọ ọrụ nke International Renewable Energy Agency (IRENA)', ga-emecha nweta ndị bi na 40,000 na ndị njem 50,000 kwa ụbọchị na-arụ ọrụ na ụfọdụ ụlọ ọrụ ọkụ na-acha ọkụ 1500. Masdar na-etinye ego na teknụzụ na-eto ngwa ngwa nke ike ịse anwụ, nke gụnyere owuwu ọkụkụ na Abu Dhabi nke nwere ike imepụta paneli zuru ezu kwa afọ iji mepụta megwatụ 130.
Dubai, ka a na-atụgharị ụfọdụ ụlọ ọrụ nkwado ala ya, ọ ka na-ewulite ikike ya dị ukwuu na ụlọ ọrụ, njem na azụmahịa. Sharjah na-agakwa n'ihu maka atụmatụ maka mmepe ụlọ ọrụ, na Ra's al-Khaimah Investment Authority (RAKIA) na-eme atụmatụ ịmalite echiche nke mpaghara ụlọ ọrụ echepụtara iji mepụta ụyọkọ akụrụngwa maka ụlọ ọrụ. Fujairah na-ehiwe mpaghara anapụtaghị n'efu, nke mbụ na UAE, nke ga-eme ka ụlọ ọrụ ndị nwere mba ofesi mee azụmahịa ihe na-erughị nke ebubo site na mpaghara zụpụtara n'efu. Na mgbakwunye, Gọọmentị UAE nọ na ngwụcha ngwụcha nke ịkwadebe iwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe a na-atụkwa anya ịkwalite okike nke ụlọ ọrụ nke mba.
Emechara ọtụtụ ọrụ dị mkpa na 2009, otu n'ime ihe ịtụnanya ịbụ agwaetiti Yas, ebe ntụrụndụ dị na Abu Dhabi na ebe obibi na sekit Yas Marina, bụ nke na-akwado Formula One Grand Prix na November 2009. Atụmatụ nchekwa dị ukwuu ebe arụchara, gụnyere ijeri Dh28 (US $ 7.62 bn) Dubai Metro, usoro ụgbọ njem na-enweghị ụgbọala na-etisa obi nke ndị isi obodo; Ọdọ Sheikh Khalifa, na-ejikọ agwaetiti Abu Dhabi na Saadiyat na Yas Island; na Nkwụ Jumeriah Monorail. Buildinglọ kachasị elu n’ụwa; Burj Khalifa dị na Dubai, mepere n'izu mbụ nke 2010.
Njem nlegharị anya bụ akụkụ mmepe dị mkpa maka akụ na ụba UAE dum. Abu Dhabi na Dubai agafeela ọzụzụ mmegharị, na-elekwasị anya na họtel ndị kacha mma na ebe ntụrụndụ. Site na agwaetiti Sir Bani Yas dị na ọdịda anyanwụ Abu Dhabi, ụzọ nzuzo nke Qasr al-Sarab, na Liwa Oasis, na Al Maha na Bab al-Shams na Dubai gaa na ebe nchekwa mara mma nke Fujairah, Ra's al Khaimah na Ajman, UAE na-enye akụrụngwa kachasị mma na ụfọdụ ebe dịpụrụ adịpụ ma mara mma. Ọrụ flagship dịka Emirates Palace Hotel, Burj al-Arab, Madinat Jumeirah, na Bruj Khalifa enyerela aka bulie profaịlụ nke mba ahụ, na nsonaazụ ahụ na Federation nwere ọtụtụ ihe inye ndị ọbịa. Ihe karịrị nde ndị ọbịa nke 11.2 ka a na-atụ anya na 2010, na-egosipụta ihe ịga nke ọma nke mbọ UAE na-eme ịkwalite itinye ego na ụlọ ọrụ ile ọbịa.
Udiri nke Ime Azụmaahịa
Na 2009, UAE rịgoro ebe iri na anọ na akụkọ 'Dorụ Ọrụ' nke ụlọ akụ ụwa na Financelọ Ọrụ Njikọ Internationalwa Ọchịchị zuru ụwa ọnụ chịkọtara. Akwukwo a amaraputara n’uwa dum na-enyocha obodo n’uzo otu odi nfe ma ndi ulo oru ndi ozo n’acho imere ahia. Njikọ ahụ bilitere na ọkwa iri atọ na atọ na ọkwa zuru ụwa ọnụ maka ndozi nhazi, akụkụ nke mkpebi Gọọmentị kpebiri ịkagbu Dh150,00 (US $ 40,871) obere ego achọrọ maka ụfọdụ azụmaahịa mmalite.
Isi ihe abụọ maka ịrị elu UAE bụ ịkọwapụta usoro etinye aka na ịnweta ikike owuwu yana mmelite ikike na Dubai ọdụ ụgbọ mmiri.
Ulo oru mpụga
Etinye ego itinye aka na ahia ndi ofesi aburula ihe di nkpa na usoro nke UAE iji mepụta ebe nchekwa maka ndi ozo n’abia, okachasi ndi n’otu ubochi nwere atụmanya nke nchekwa hydrocarbon. N'ime ndị isi ụlọ ọrụ mkpuchi mba ụwa bụ Emirates bụ: Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Council, Invest AD, The investment Corporation nke Dubai, Dubai Holding, Dubai Holding Commercial Operations Group (nke gụnyere Dubai Properties Group, Sama Dubai, Tatweer, Na Duabi Holding Investment Group), yana Dubai World. Na mgbakwunye, Mubadala, Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) na International Mmanụ Ala Lọ ọrụ itinye ego (IPIC) na-agbaso mmepe ike na mba ọzọ.
Nzọụkwụ ndị ụlọ ọrụ gọọmentị etiti dị na 2008 weghachite ntụkwasị obi na sistemụ ego, gụnyere UAE Central Bank Dh50-ijeri (US $ 13.6 bn) US iji kwado ndị na-agbazinye ego na mpaghara, yana Ministrylọ Ọrụ Ego UAE Dh70 ijeri (US $ 19 bn) fluidity A haziri atụmatụ nkwado, iji kwadote ihe ịgbazinye ihe, azụmaahịa ngwaahịa ma nyekwa aka n'ọrụ akụ na ụba. Na 2008, Gọọmentị Federal kwuputara na ọ ga-enweta ijeri Dh120 (US $ 32.7 bn) dịịrị ndị ụlọ akụ n'ofe obodo n'okpuru ọtụtụ usoro ịgbazinye ego, na-ekwe nkwa idobe ego na ntinye ego na afọ atọ.
N’ọnwa Febụwarị nke 2009, Ngalaba Na-ahụ Maka Ego Abu Dhabi tinyere DH16 ijeri (US $ 4.35 bn) n’ime nnukwu ụlọ akụ okpukpo ise. Ihe ndị a nyeere aka iji mee ka mpempe akwụkwọ doo anya na akụ, ọ bụ ezie na uru nke ụlọ akụ dara na nke mbụ, na Ministri nke Economy guzobere kọmitii na-ahụ maka ego ngwa ngwa iji lelee ihe ndị ọzọ iji kwado ndị na-agbazinye ego.
N'afọ ahụ, ụlọ akụ kwuru gbasara mmụba nke adịghị ike na ịkwụ ụgwọ ego na mgbazinye azụmaahịa na ndị ahịa. N’ihi nke a, ụlọ akụ ndị UAE depụtara edepụtara lebara anya nke ọma site n’ịkpesa usoro ha ga-enyefe ego karịa ego mgbazinye ọjọọ. Iji nyere aka na itinyekwu ego n'ụlọ akụ, Central Bank gwara ndị na-agbazinye ego na site na 2010 ha ga-agbaso ụkpụrụ Basel II banyere ego isi obodo maka ụlọ akụ ma lebara anya na njikwa na njikwa. Gọọmentị kwuputara atụmatụ ịjikọtara ndị na-enye ego mgbazinye ụlọ ọrụ Emirates abụọ, Amlak na Tamweel. A na-ahụta nke a dị ka ihe dị mkpa iji gbakee n'ahịa ụlọ.
Kwụghachi ego mgbazinye ego sitere na ahịa site n'aka ndị ome iwu gọọmentị bụ ihe na-elekwasị anya na ọrụ na 2009. Na February 2009, Gọọmentị Dubai rere Ijeri Dh36.7 (US $ 10 bn) na njikọ nke Central Bank iji nyere ndị ụlọ ọrụ aka na-achịkwa aka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ma kwụọ ndị ọrụ ngo. Iji na-elekọta nkesa nke ego ndị a, E guzobere Ego Nkwado Ego Dubai na July 2009. Na 25 November 2009, Gọọmentị Dubai kwupụtara na ọ debelarị nde DH18.4 (US $ 5 bn) iji nweta ego site na National Bank Abu Dhabi na Al Hilal Bank, ha abụọ nwere na-achịkwa otu Abu Dhabi nnukwu akụ na ụba kachasị ike nke ọchịchị, na Abu Dhabi Investment Council. Dubai rụkwara ọtụtụ ụgwọ dị ukwuu na 2009, gụnyere ijeri DH12.47 (US $ 3.4 bn) imezigharị ụgwọ onye na-ahụ maka mgbanwe Borse Dubai ji ụgwọ na February, na ịkwụghachi ụgwọ ijeri DH3.67 (US $ 1 bn) Dubai Civil Aviation Authority Mmekọrịta Islam na November.
Nkwakọba ego edepụtara na Dubai Market Market kwụsịrị afọ 10.2 pasent, mana ha ka karịrị 70 pasent ala site na ọkwa dị elu nke afọ gara aga. Nkwakọba ngwaahịa na Abu Dhabi Securities Exchange welitere site na 14.7 pasent na 2009, mana ha ka gbadata 46 pasent site na elu 2008.
Site na obere ala nke ụfọdụ ndị agbataobi agbata agbata ya, UAE bụ agbanyeghị na mpaghara nke anọ na - ebupụ mmanụ mmanụ, mgbe etichara. Saudi Arabia, Iran na Iraq.
UAE nwere mmanụ isii kachasị gosipụtara na mmanụ ụwa, yana gas nke asaa kachasi adị gas gas. Agbanyeghị naanị mba itoolu na - enweta mmanụ na mba ụwa, ọ bụ mba nke ise na - ebubata mmanụ, naanị Russia na Saudi Arabia na-ebubata ya nke ọma. A na-ebuga ya ọdụ ụgbọ mmiri nso ndị Iran, na Kuwait, nke ha nwere nnukwu ikike.
Na 2009, n'ihi ihe nlere anya na nrube isi na nbipụta ndekọ nke oftù Mba Ndị Dị na Mbupụ Mmanụ Ala (OPEC) ga-esi kwụsie ike na mmanụ mmanụ, ihe nrụpụta mmanụ nke UAE dara ihe dị ka barel nde 2.3 kwa ụbọchị (bpd) site na 2.9 nde na 2008. Ihe a na-emepụta gas na-eguzo na ihe ruru ijeri 7 ijeri cubic ụkwụ kwa ụbọchị. UAE na-aga n'ihu n'atụmatụ ịgbasa ikike ikike mmanụ na mmanụ, mana o meela ka oge maka mmepe mmanụ ka na-ebute ihe ndị dị mkpa gas.
Na mbido 2009 Federation gas gosipụtara guzoro eguzo na 227.1 trillion cubic ụkwụ - gas zuru oke maka ihe karịrị afọ 130 nke ọkọnọ n'oge ọnụọgụ mmepụta. Tinyere ihe ndị ọzọ, nke a pụtara ụkọ ụkọ Emirates abụghị n'ihi enweghị nchekwa gas, kama ọ bụ mmepe ezughi ezu, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ihe ndị na-enye gas nwere ụdị dị ọnụ ma sie ike nrụpụta. Abu Dhabi dị oke mkpa ịkwalite ikike mmepụta mmanụ na ikuku nke UAE, n'ihi na o nwere ihe dị ka 94 pasent nke ikike mmanụ Federation na karịa 90 pasent nke gas ya. Ọ na - agbasawanye ikike maka mmepụta mmanụ na gas.
Ka ọ dị ugbu a, mmepụta mmanụ nke Dubai, nke dị ihe dị ka ọkara nke GDP nke ndị isi ala, adaala nke ukwuu site na 1991 elu nke 410,000 bpd; site na 2007 ọ gbadata na 80,000 bpd. Ka ọ na-aga n'ihu na-adọba mmanụ site na mpaghara ndị dị n'ụsọ osimiri, Dubai na-erikwa mmanụ karịa ka ọ na-emepụta, ọ na-agbakwa mbọ ike na mbubata ya iji mezi ọdịiche ahụ. Ndi isi ala ahụ azụtala nde narị cubic ụkwụ kwa ụbọchị nke gas si Dolphin Energy, ụlọ ọrụ Abu Dhabi na ebubata gas site na Qatar.
Anọ n'ime obodo ise nke UAE fọdụrụnụ na-enwe obere mmanụ na mmepụta mmanụ; Fujairah anaghị emepụta mmanụ ma ọ bụ gas, ọ bụ ezie na a na-eme ugbu a na-eme nchọpụta nkwọ ụgbọ mmiri. Agbanyeghị, ọdụ ụgbọ mmiri nke abụọ kachasị ukwuu n'ụwa dị n'ụsọ osimiri ya. Ọdụ ụgbọ mmiri nke Fujairah, nke dị n'akụkụ Oké Osimiri Arebia, na-ejide ihe dị ka tọn Tan 90 X kwa ọnwa nke mmanụ ụgbọ njem na ngwaahịa mmanụ ndị ọzọ. Mbata nke 1 nke mbubata gas site na ngbanye Dolphin Energy site na Qatar emeela ka ike na mmepe mmiri na-anọ n'okpuru ala ma kpalie ụlọ ọrụ mpaghara.
IPIC, nke ndị gọọmentị Abu Dhabi nwe, na-ewuli ọkpọkọ mmanụ agbịdị ga - agbasa ruo 150,000 bpd mmanụ si n'ọdụ ụgbọ mmiri Abu Dhabi ma ọ bụ ọdụ mbupụ mbupụ ọhụrụ na Fujairah. Ebumnuche a bu iwebata ụzọ mbupụ maka Abu Dhabi dị n'akụkụ gafere oke mkpọchi oke osimiri dị n'okporo ụzọ Hormuz. Ezubere ya maka mmezu na 2010, na mbu mbu nke mbu nke ugbo agha site na Fujairah bu anya na 2011. IPIC na-ewulitekwa ebe ana - anụcha mmanụ na ebe nchekwa na ọdụ ụgbọ mmiri Fujairah.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 pasent nke ngụkọta mmanụ ụwa a nwapụtara na ihe nchekwa ikuku gas kachasị nke ise, UAE bụ onye mmekọ dị oke mkpa na onye na-eweta ọrụ dị mkpa na ahịa ụwa. Ezie na akụ na ụba, mbupụ mmanụ ugbu a ruru naanị ihe dị ka 30 pasent nke mkpokọta ụlọ, n'ihi iwu gọọmentị na-eme ihe ike ezubere iji mepụta akụ na ụba UAE.
Ndi UAE na - achokwa mmeghari ohuru nke mmeghari ohuru na ume oru. Na 2005 UAE kwadoro nkwekọrịta Kyoto na Nkwekọrịta UN maka Mgbanwe Ihu Igwe, na-aghọ otu n'ime mba ndị mbụ na - emepụta mmanụ na - eme otú ahụ. Abu Dhabi ehiwela otu n'ime usoro mmeghari ohuru na mmeghari ohuru nke uwa.
Onye Ọ bụla Emirate na-achịkwa mmepụta mmanụ ya na mmepe mmepe ya. Abu Dhabi na-ejide ihe karịrị 90 pasent nke mmanụ mmanụ nke UAE, ma ọ bụ ihe dị ka barel ijeri 92.2. Dubai nwere ihe dị ka ijeri dọla 4 dị ka ijeri, Sharjah na Ras al-Khaimah na ijeri mmanụ 1.5 na nde nde 100 dị iche iche.
Abu Dhabi nwere akụkọ ihe mere eme nke ịnabata akụ na ụba nke mpaghara ya na mpaghara nyocha mmanụ na gas na mpaghara mmepụta ya. N’ezie, Abu Dhabi bụ naanị otu onye otu OPEC ịhapụ ịdebe njide nke ndị na-etinye ego si mba ọzọ n’oge ebili nke mba ahụ ga-ekpochapụ ụlọ ọrụ mmanụ na gas zuru ụwa n’agbata afọ 1970, ọ na-aga n’ihu na-erite uru na ọkwa dị elu nke itinye aka na mpaghara. Taa ụlọ ọrụ mmanụ mba dị iche iche si United States, Japan, France, Britain na mba ndị ọzọ na-aga n'ihu na-ejide ọnụ ụzọ nha anya dị n'etiti pasent 40 na 100 na ngụkọta mmanụ dị na Abu Dhabi.
UAE na-ebuga Japan 60 pasent mmanụ ya na Japan, na-eme ka ọ bụrụ onye ahịa ahịa UAE. Mbupụ gas na-abụkarị Japan, onye kachasị zụta mmanụ gas n'ụwa, UAE na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ asatọ nke ihe Japan chọrọ.
N'ihi ihe ndị metụtara ala na-emetụta ọnụ ahịa njem, UAE na-ebufe obere mmanụ na gas na United States. Na agbanyeghị, UAE bụ mmanụ dị mkpa na-ebubata mmanụ na mba ụwa na nke abụọ naanị Saudi Arabia n'ihe gbasara ikike nrụpụta mmanụ. Na mgbakwunye, atụmatụ ike nke UAE iji gbasaa ikike nke mmepụta ga-atụnye ụtụ n'ibibi ọdịnihu, mmụba a na-achọrọ na ọnụahịa mmanụ.
Ihe oru Dolphin, nke na-ebubata gas sitere na Qatar na UAE, bụ nkwekọrịta mbụ nke ikike ngbanye ókèala n'etiti mba Gulf. Ihe oru ngo a ghapuru mmanu Abu Dhabi maka nnabata mmanu na mbupu ya na mbu. Ulo oru mmanu nke United States na ndi France nke obula nwere ogha ndi 24.5 nke oru ha na oru ngo a, ebe Gọọmentị Abu Dhabi na-ejide pasent 51 fọdụrụ. Mbughari ahia mbu nke aku eke Qatari malitere n’oge ọkọchị nke 2007 ga-aga n’ihu n’oge afọ 30 nke mmepe na nkwekọrịta nkwekọrịta na gọọmentị Qatar.
Ichekwa Oilgbọala Mmanụ
Na mbọ iji nwelite nchekwa nke ọkọnọ, gọọmentị Gulf na-amụ maka mmepe nke ọkpọkọ mmanụ ga-agafe Strazọ Hormuz. Ihe dị ka ụzọ abụọ n'ụzọ ise n'ụzọ ise nke mmanụ azụ ahịa ugbu a na-ebu mmiri site na ụgbọ mmiri na-ebufe ebe a gafere 34.
Ọ bụrụ na etinyere ya, ọkpọkọ ndị ahụ nwere ike ịbute ihe ruru nde mmanụ nde 6.5 kwa ụbọchị ma ọ bụ ihe dị ka 40 pasent nke ego a na-ebufe ugbu a na Strait. Rụ ọkpọkọ nke mbụ, nke pere mpe ga-ebu mmanụ si ubi mmanụ Habshan UAE rue ​​Emirate nke Fujairah, nke dị na mpụga nke isi Oke Osimiri Oman.
Andmụba Mmanụ Mmanụ
UAE na-abawanye n’ike n’ihu n’ichepụta ya maka iweta ahịa ike ụwa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ mba OPEC na ọtụtụ mba ndị na-abụghị OPEC ahụla ka mbelata amịpụtara n'ime afọ ise gara aga, UAE emeela ka mkpokọta mmanụ dịkarịsịrị anya rịa elu 31. N'afọ ọ bụla n'afọ ahụ, amamịghe afọ ọ bụla dara n'okpuru afọ gara aga.
Na-atụgharị maka ọdịnihu, ụlọ ọrụ mmanụ na ikuku na UAE na-aga n'ihu ịchọpụta ọrụ ọhụrụ chọrọ iji bulie ikike nrụpụta mmanụ nke mba ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 4 kwa ụbọchị site na 2020, nke ga-abawanye mmụba nke ihe dị ka 40 pasent karịa ugbu a emeputa ọkwa.
Eletriki: N’iile na-agbasawanye mkpa
Mmụba akụ na ụba na-agafe agafe UAE emeela ọtụtụ mmụba n'ọchịchọ ọkụ eletrik. Atụmatụ ndị mmadụ na-atụ ugbu a na-egosi na ike anụ ụlọ chọrọ ike ga-karịa okpukpu abụọ site na 2020. Ebe oke gbasara etu ike ngwa ngwa ike ọdịnala, dị ka gas sitere, ga-esi bute ahịa, yana mgbagha maka mgbanwe ihu igwe, Gọọmentị UAE ewepụtala atụmatụ dị iche iche iji chọpụta usoro ọzọ maka imepụta ike achọrọ iji kpalite ike ya. aku na uba.
Ndi UAE na-enyocha ihe ga-ekwe omume iwulite mmemme ume ikuku nuklia n'udo. Gọọmentị UAE maara nke ọma banyere ezi uche dị na mkpokọta ndị na - ebugharị ngwa agha nuklia na ọbụna nyocha dị mfe nke enwere ike. N'ihi ya, Gọọmentị UAE arụ ọrụla iji mee ka ebumnuche udo ya na nke enweghị atụ doo anya, dabere na nyocha nke ugbu a maka atumatu ike udo nuklia yana ikike mbuga ya n'ọdịnihu. Gọọmentị wepụtara ọha na eze akwụkwọ ozi omimi, na-ekwupụta etu a ga-esi nwee ike ị nweta mmepe nuklia n'udo, n'enweghị nsogbu na n'udo. Dịka akụkụ nke nkwa ya maka nghọta, mgbasawanye, nchekwa na nchekwa, UAE ekpebisiwo ike na ọ gaghị achụ akụnụba uranium kama ịdabere na mba ụwa maka ikuku nuklia. N'ime usoro a, UAE arụkọ ọrụ na International Atomic Energy Agency (IAEA) na gọọmentị ndị ọzọ, gụnyere United States.
N'agbanyeghị oke egwu mmanụ na mmanụ maka UAE, mba ahụ emeela nkwa dị omimi na ike ọzọ. UAE na - eme ihe iji belata ikuku ikuku site na ebumnuche dị ukwuu na Abu Dhabi na Dubai.
Dubai na-azụlite atụmatụ kachasị nke gburugburu ebe obibi nke ga-ahụ na uto na ọganihu na-enweta ma na-echekwa gburugburu ebe obibi. Nchịkwa elekere eletrik ga-arụ ọrụ dị ka ọgaghị aba njem ọhaneze.
UAE kasị ukwuu nke UAE, Abu Dhabi, enyefewo ihe karịrị ijeri $ 15 ijeri mmemme ume ọhụrụ. Ihe Masdar Initiative na-egosi nkwa ejima na gburugburu ụwa na ụba nke akụ na ụba UAE. Ihe Masdar Initiative na-elekwasị anya na mmepe na azụmaahịa nke teknụzụ na ume ọhụrụ, ike ọrụ, njikwa carbon na monetization, ojiji nke mmiri na desalination.
Mmekorita nke Initiative gụnyere ụfọdụ ụlọ ọrụ ike ụwa na ụlọ ọrụ etolite etolite: BP, Shell, Occidental Petroleum, Total Exploration na Production, General Electric, Mitsubishi, Mitsui, Rolls Royce, Imperial College London, MIT na WWF. O nwere isi ihe anọ: Ebe a na-emepụta ihe iji kwado ngosipụta, azụmahịa na ntinye nke teknụzụ ike na-adigide. The Masdar Institute of Science and Technology nwere mmemme ngụsị akwụkwọ na ike na mmeghari ohuru, dị na Masdar City, bụ carbon mbụ na - anọpụ iche na ụwa, n'efu, obodo enweghị ụgbọ. Otu ulo oru mmepe lekwasịrị anya na mbubelata mmenye anwuru-a, na uzo nhicha ocha di iche-iche dika Kyoto Protocol nyere. Mpaghara Akụkụ Pụrụ Iche iche ịnabata ụlọ ọrụ na-etinye ego na teknụzụ ume ike na ngwaahịa.
Iwu UAE Maka UAE
UAE adịlarị ike dị mkpa maka ike ma na-aghọwanye uru dị mkpa maka ike. Na mbọ ya iji mee ka mmepe nke nchekwa mmiri ndị ọzọ dị na ike ya na mbọ ya na-atụnye ụtụ na ntinye nke isi iyi ndị ọzọ, UAE nwere olile anya ịga n'ihu n'ọgbọ ọdịnala ya nke ọrụ nlekọta ọrụ.
Nchekwa na nchedo gburugburu UAE bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị arụ ọrụ o chere ihu ruo taa. Okpomoku di elu ya na mmiri ozuzo di ala meputara onodu ojoo, choro mmeghari ihe puru iche diri anumanu na osisi iji di ndu. Ọbụna obere mgbanwe mgbanwe ihu igwe nwere ike inwe oke mmetụta na ihe dị iche iche nke UAE. Na mgbakwunye, ọnụ ala dị n'ụsọ oke ala pụtara na obere ịrị elu nke ala n'okirikiri nwere ike inwe oke mmetụta n'akụkụ mpaghara dị n'ụsọ osimiri, ebe imirikiti ndị bi na mba ahụ bi na ebe ọtụtụ ihe mmepe na-eme. N’ezie, ihe omumu sayensi na - achoputa ihe iriba ama na ala Oke Osimiri nwere ike ijula ​​elu.
Onu ogugu gbagoro site na 180,000 na 1968 ruo ihe ruru nde ise taa. N’ihi nke a, etu ala a ga-esi nọrọ ebe obibi, azụmaahịa na nke mmepụta ejirila nke ukwuu. Lamgba egwu na mmepe enwughachila UAE akuku mmiri n’obere oge. Mmụba nke akụrụngwa nke Federation n'ụdị ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri na okporo ụzọ abanyela na mbụ ebe obibi ebe obibi, ebe okwute okwute maka owuwu ahụ emetụtala ọtụtụ ugwu Ugwu Hajar.
Na agbanyeghi mgbanwe mgbanwe, Gọọmentị nyefere onwe ya ichebe gburugburu ebe obibi na ị nweta oke nguzi na nchedo gburugburu na mkpa mmepe.
Federal Ministry of Environment and Water, ya na ụlọ ọrụ mpaghara - nke kachasị arụ ọrụ bụ thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Abu Dhabi, bụ onye na-ahụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ anọ na ise nke ala UAE - ka na-arụ ọrụ na mmemme mmemme nke nyocha sayensị na nkwadebe. na ntinye nke iwu na ntuziaka mgbe nile.
Edebere mkpọsa nkuzi site na enyemaka nke ndị na-abụghị gọọmentị dịka Emirates Wildlife Society (EWS) iji mee ka ọha na eze mara banyere mkpa ọ dị iji chebe gburugburu ma belata ike na mmiri.
Mpaghara nchekwa nchekwa nke Yasat Marine, tinyere Digongs nọ n'ihe ize ndụ, ka emeela ka ọ gụnye ọtụtụ agwaetiti ndị ọzọ, ma ugbu a na-ekpuchi ebe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ square kilomita 3000. EWS na Obodo Fujairah kwuputala Wadi Wurrayah dịka ihe nchekwa echekwara. N'ihe banyere la tahe lara n'iyi lahr, nke bu ugwu ugwu UAE.
Ichebe mmiri dị mma na oke mmiri dịkwa elu na atụmatụ UAE, ebe mmetọ ikuku na-esite na okwute okwute na imepụta simenti emewo ka mmechi nke ntọala ụfọdụ na Ra's al-Khaimah na Fujairah.
Na mgbakwunye, Federation ahụ esorola mba ndị ọzọ rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ na-adabere na nkwekọrịta nke abụọ iji chebe otu ụdị, dịka houbara bustard, nke na-ebute n'etiti etiti Eshia ma na-akwaga na Ọwara Arab. Uzo ahọrọla UAE ka ọ bụrụ Isi ụlọ ọrụ maka nkwekọrịta mba ụwa ọhụrụ maka nchekwa na nchedo ụdị nnụnụ na-eri anụ na -aga n'ebe niile. Europe, Afrịka na Eshia.
Media na Omenala
UAE bu obi ahia nke ngalaba mgbasa ozi nke Middle East, na-eje ozi dika mpaghara mpaghara nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba ụwa yana dịka ubi na-eme nri maka mmepe nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụlọ. Ngalaba Media Media na-ahụ maka mpaghara na-eto ngwa ngwa na-ahụ maka ọrụ, na-ahụ maka inye ikikere mgbasa ozi, ịmanye iwu nke usoro mgbasa ozi, ma na-agba ngalaba ozi mpụga na Newslọ Ọrụ Mgbasa Ozi Emirates, WAM.
Otu n'ime ọgbakọ mgbasa ozi kachasị ukwuu nke obodo ahụ bụ Abu Dhabi Media Company, nke nwere ma na-arụ ọrụ na telivishọn dịgasị iche iche, ụlọ ọrụ redio, ọtụtụ mbipụta (akwụkwọ akụkọ Al Ittihad, akwụkwọ akụkọ National, akwụkwọ akụkọ Zahrat Al Khaleej na Majid Majid). ) na ọtụtụ azụmaahịa ọzọ metụtara ụlọ ọrụ mgbasa ozi, gụnyere ụlọ ọrụ mmepe ihe nkiri Emagenation, United Printing Press na Live.
Mpaghara zoro ezo abụrụla aka na mmepe mgbasa ozi, CNN ehiwela ebe akụkọ akụkọ na mpaghara Abu Dhabi ọhụụ ọhụụ abụọ nkeXXX nke dọtara ọtụtụ ndị ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ. Dubai Media City nwere karịa azụmahịa 54 edebanyere aha dịka CNN, BBC, MBC na CNBC. Nke a bụ otu mpaghara ụyọkọ mgbasa ozi nke Tecom na-arụ, gụnyere Dubai Internet City, Dubai Studio City na International Media Production Mpaghara. Emeela mpaghara ndị a site na mmepe nke obere mpaghara free media dịka Fujairah Creative City na RAK Media City.
A na-agba ume mmepụta ihe nkiri, ma na mba na nke ụlọ, yana ọtụtụ òtù kwadoro ya, gụnyere Dubai Studio City, twofour54, Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH), The Circle na Abu Dhabi Film Kọmitii.
Akwụkwọ, gụnyere ntụgharị nke isi ọrụ gaa na Arabic, yana ndị otu dị ka Kitab na Kalima na-akwalite. Nnukwu oriri maka ndị na-ebi akwụkwọ nwere na UAE gụnyere Sharjah International Book Fair guzobere ogologo oge na Abu Dhabi International Book Fair, ebe onyinye kachasị akwụkwọ ọgụgụ bụ Sheikh Zayed Book Award, nke gara Pedro Martinez Montavez na 2009.
The Dubai Press Club na-ahazi, gụnyere ihe ndị ọzọ, Arab Media Forum, ma na-akwado Arab Aria Journal Awards, ugbu a n'afọ nke asatọ ya, na -ejue ụzọ iri na abụọ.
Ihe nketa na omenaala dị n’etiti njirimara obodo, na UAE na-eme nnukwu mbọ iji chekwaa ọdịnala ya. N'otu oge ahụ, gọọmentị etiti na-elegharị anya n'ọdịbendị, na-ekwusi ike na itinye ego na akụrụngwa ụwa na ịkpụzi àkwà mmiri dị n'etiti East na West.
Federal Ministry of Culture, Ndị ntorobịa na ndị mmepe obodo na - arụ ọrụ na mpaghara ndị a, na - ekepụta ohere maka ndị ntorobịa Emirates ka ha sonye na mmemme ọdịnala, ọgụgụ isi, egwuregwu na ntụrụndụ, ma na - agbakwa ndị amaala okenye ume isonye na ndị na - enye ndụmọdụ, na - ekenye ihe ọmụma banyere ọdịbendị ha. ọgbọ.
Iji nyere aka mee ka e nwee ekele maka inye ekele, ADACH na-ahazi ọtụtụ ihe egwu, gụnyere Abu Dhabi Classics, nke na -elele Middle East mpụta mbụ nke New York Philharmonic na 2009. Ememe egwu WOMAD zuru ụwa ọnụ na Abu Dhabi. Na mgbakwunye, usoro egwu egwu akpọrọ 'Dubia Sound City' nwere nnukwu mmetụta na 2009. N'ihe banyere nka anya, na 2009 mbu ihe ngosi ‘Emirati Ngosiputa’ gosipụtara ndị omenkà obodo asatọ na asaa, site na ndị na-ese ihe nkiri wee ruo ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe osise, vidiyo na ndị na-ese ihe ngosi. Ka ọ dị ugbu a, emere Sharjah Biennial, Art Dubai, Art Fair na ọtụtụ ihe ngosi ndị ọzọ na mmekorita ya na ndị mmekọ dịka Guggenheim Foundation, Louvre, Mahadum New York Abu Dhabi na Paris-Sorbone University Abu Dhabi. Contemporary art na-anọchi anya nke ọma na ụlọ ọrụ raara onwe ya nye na Emirates.
Otu n'ime atumatu ọdịnala mba ụwa nke Minista na-ahụ maka ọdịbendị, ndị ntorobịa na mmepe obodo so na afọ a bụ nzukọ nke ụlọ mgbasa ozi UAE mbụ na Venice Biennale. Ememe ndị ọzọ nọ na mba ofesi gụnyere mmemme 'UAE Cultural Days' were izu na Berlin na ihe ngosi Amirati-German na Huamburg, ebe ebidokwara atụmatụ Mịnịsta ọzọ, 'Mkparịta ụka Ọha na Ọdịnala'.
N'elu ebe ọdịnala sara mbara, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ụwa dịka Guggenheim Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, na Sheikh Zayed National Museum na-aga n'ihu. Ka ọ dị ugbu a, Ngalaba Ngosipụta Ihe Sharlọ Ọrụ Sharjah a hazirila nke ọma na-elekọta ebe ngosi ihe mgbe ochie iri na asaa na ụlọ ọrụ ọdịbendị, gụnyere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ọhụụ nke mmepe Alakụba.
Ndi mmadu na ndi mmadu
Ọchịchọ imeziwanye ọkọlọtọ nke ndụ nke ndị ya na ọdịmma ọha mmadụ chụpụrụ ọtụtụ iwu gọọmentị - ọ bụghị naanị n'ihe gbasara mmepe akụ na ụba, kamakwa n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'afọ ole na ole dị mkpụmkpụ, nnukwu mgbanwe mmekọrịta ọha na eze emeela na ọha mmadụ bụbu ndị agbụrụ; ọ bụ ihe ịtụnanya dị egwu, n'agbanyeghị oke ọgba aghara a, na UAE bụ obodo kwụsiri ike ma kwụsie ike, nke mepere emepe ma nwee ọganihu, ama ama maka nnagide, mmadụ na ọmịiko.
Mgbalị ndị gọọmentị nyere iji nyere ndị mmadụ aka na mgbanwe agbanweela site na iwu, guzobere na 2009, na okwuchukwu n'ekpere ụbọchị Fraịde niile alakụba Federation ga-etinye uche na ọrụ mmekọrịta ọha na eze na agụmakwụkwọ ọ bụghị naanị na nkwenkwe okpukpe. Isi okwu gụnyere etu e si azụlite ụmụaka, ikike ụmụ nwanyị na mkpa ọrụ, lve nke obodo na ndidi.
Iwu mmekọrịta ọha na eze dị irè, dịka egosiri na ọkwa dị na UN Human Development Index (HDI), nke na-ele anya karịrị GDP na nkọwa sara mbara nke ịdị mma. N'agbata 1980 na 2007, UAE HDI bilitere site na 0.72 kwa afọ, ma ọ bụ taa 0.903, sitere na 0.743. Nke a na-ewepụta Federation iri atọ na ise n'ime mba 182 maka data dị - ichekwa ebe maka UAE na ndepụta nke mba nwere akara mmepe mmadụ dị elu.
Na agbanyeghị, mmụba ọnụ ọgụgụ ndị otu Federation kpatarala ihe ịma aka mmadụ. Na njedebe nke 2009, ọnụ ọgụgụ ndị UAE dị atụmatụ 50.6 nde, site na nde 4.76 na 2008, ma ọ bụ mmụba kwa afọ nke ihe dị ka 6.3 pasent; onu ogugu onu ogugu ndi mmadu n’aru dika odi na 3.4 na 2009. Agbanyeghị, n'agbanyeghị mmụba dị ngwa a, UAE ka jigidere ọnọdụ ya dị ka otu n'ime mba ndị kachasị baa ọgaranya n'ihe gbasara ego GDP na mkpụrụ ego isi ọ bụla, nke e mere atụmatụ na Dh195,000 (US $ 53,133.5) na mbido 2009; nke abụọ bụ Qatar na Arab Arab.
Ulo a aburula isi nkuku nke ndi obodo UAE. Taa, okwu banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ụba nwere ike ịgbagha ọbụlagodi ndị ezinaụlọ, na Gọọmentị na-enyere ndị nọ na mkpa aka, ọkachasị ndị agadi, ndị nwere nkwarụ na ndị gbara alụkwaghịm. Na mgbakwunye, ọtụtụ ndị ọrụ enyemaka gọọmentị na ndị na-abụghị ndị ọrụ ebere na-etinye aka na mmemme ọdịmma mmadụ. Ndị UAE Red Uresia UAE, na Nkebi nke kachasịnụ, bụ ọgbakọ kacha nwee enyemaka na mba a, na-ahụ maka mmemme mmekọrịta ọha na eze, akụ na ụba, ahụike na agụmakwụkwọ. A na-enyekwa ndị enyemaka dị mma site n'aka ndị ọrụ na-elekọta mmadụ nke General Women Union na-elekọta.
Gọọmentị na-enyekwa mkpa maka ụlọ obibi mpaghara yana ebumnuche ya maka iwulite obodo ndị nwere ụlọ ọrụ dị ha mkpa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 17,000 ọhụrụ ụlọ maka Emiratis ga-ewu na Abu Dhabi n'ime afọ ise na-esote, yana 50,000 gafere afọ iri abụọ. A ga-enye ụmụ amaala na-akwụghị ụgwọ ụlọ na ebe a na-eme ihe n’efu. Mmemme Housinglọ Sheikh Sheikh Zayed, nke gọọmentị na-akwụ ụgwọ iji nye onyinye na mgbazinye ego maka UAE obodoines, na-aga n'ihu na-agbasawanye ọrụ ya na Emirates.
UAE na-akwanyere iguzosi ike n'ezi ihe nke mmadụ ọ bụla bi na Federation. Iwu a na-ekwe nkwa ịha nhatanha na ikpe ụmụ amaala ọhaneze bụ Iwu Iwu. Iwu ahụ depụtakwaara ikike na ikike nke ụmụ amaala niile, na-egbochi ịta mmadụ ahụhụ, njide nke enweghị ike na njide, na ịkwanyere ikike ndị metụtara obodo, gụnyere nnwere onwe ikwu okwu na nke akụkọ, n'udo.
nzukọ na mkpakọrịta, na omume nke nkwenkwe okpukpe. Gọọmentị kpebisiri ike ịkwalite, n'ụzọ bara uru, ụkpụrụ nke Nkwupụta ofwa Nile Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadu ma kpebisie ike imezi ihe ndekọ ụlọ ya site na iweta iwu na omume ya. Nke a kwekọrọ n'ihe nketa ọdịbendị nke UAE na ụkpụrụ okpukpe, nke na-egosipụta ikpe ziri ezi, nha anya na ndidi.
Na ọkwa mba ụwa, Federation bụ aka nke Mgbakọ nke mkpochapu ịkpa oke megide ụmụ nwanyị, Mgbakọ nke ikike ụmụaka, Nkwekọrịta Ndị Ọrụ Mba Nile na Ọgbọ Dị Mpe, na Mgbakọ nke ikike ndị mmadụ nwere nkwarụ.
Na ọkwa mba ahụ, Federation bụ aka nke Mgbakọ nke mkpochapu ịkpa oke megide ụmụ nwanyị, Mgbakọ nke ikike ụmụaka, Nkwekọrịta Ndị Ọrụ Mba ụwa nke Oge Obere, yana Mgbakọ nke ikike ndị mmadụ nwere nkwarụ.
Na ọkwa nke mba, atụmatụ gọọmentị na-elekwasị anya n'ịhụ mmepe obodo na atụmatụ dị iche iche na-akwalite ike nke ụmụ nwanyị na mmepe nke agụmakwụkwọ na usoro ahụike dị elu, yana nnabata nke ndị otu nwere mkpa pụrụ iche na otu ndị ọzọ adịghị ike banye na usoro mmepe.
Banyere okwu banyere ndị ọrụ, UAE na-achọ ijikwa ma na-achịkwa gburugburu ebe ọrụ dị ka iwu ụwa na omume ndị ọrụ mba ụwa kachasị mma. Emebeela mbọ dị iche iche iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ, na-ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa n'oge ma melite ọnọdụ obibi na ọrụ, yana ịgba mbọ hụ na e mebere iwu iji belata mmebi.
Nkwekorita ndi nwoke na ndi nwanyi noo na isi ochichi ya site na ntu aka a, ndi nwanyi na UAE anatala nnoo anya na ndi ha na ha nwere mmekorita nke mba. Gọọmentị gara n'ihu na-agbaso usoro iji nyere ụmụ nwanyị aka na mpaghara ọdịnala, mmekọrịta mmadụ na ọhaneze. N'ihi ya, a họọrọ UAE na ọkwa iri atọ na asatọ na 2009 UN Human Development Report Gender metụtara Mmekọ Mmekọ - Onyonyo na-etinye ya n'etiti mba ndị kacha-elu.
Womenmụ nwanyị UAE taa na-ekere òkè na ụlọ ọrụ gọọmentị niile, gụnyere ndị isi, ngalaba iwu na ngalaba ikpe, ma nwee ụdị ọrụ dị iche iche. N'ezie, ụmụ nwanyị UAE ugbu a mejupụtara 66 pasent nke ndị ọrụ ọha na eze, pasent 30 nke ha nọ na ọkwa dị elu.
Citizensmụ amaala UAE niile nwere ohere zuru oke maka agụmakwụkwọ mbụ, nke abụọ na nke agụmakwụkwọ ka elu. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ngalaba agụmakwụkwọ ahụ ewerela ihe ọhụrụ: mmezigharị ya na mmelite ya na-anọchi anya nzọụkwụ dị mkpa na ebumnuche mmepe nke Federation na-aga n'ihu, a na-agbakwa mbọ dị ukwuu n'ofe bọọdụ ahụ iji tụgharịa usoro ọmụmụ ma hụ na a na-enyocha ụlọ akwụkwọ na kọleji nke ọma. wee kwenye.
Ọzụzụ Pụrụ Iche na-anata nlebara anya ọhụụ, yana mgbado anya na 2009 na njikọta nke ụmụ akwụkwọ mba si n'ọtụtụ ụlọ ọrụ enyemaka pụrụ iche n'ụlọ akwụkwọ ọha. Usoro ohuru maka ulo akwukwo oha na eze n’uche ichoro ka ulo akwukwo mebe iwu a, a gha atari ntaramahuhu n’ihi anabataghi umuaka nwere mkpa puru iche.
Mmụta ụlọ akwụkwọ sekọndrị na UAE na-enwe ọganihu na mgbanwe ngwa ngwa. A na-ewulite ogige Mahadum ọhụrụ nke Zayed na 75 hectare na Isi Obodo na-apụta. Mahadum UAE dị na Al Ain nwekwara ebumnuche maka mmụba dị ukwuu, a na-arụkwa ogige ọhụrụ. Institutionslọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa nke atọ gụnyere kọleji Teknụzụ dị elu, ebe a na-azụ Etihad, ụlọ ọrụ Emirates Aviation maka Aerospace na Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ, Emirates Institute for Banking and Finance, na kọleji Etisalat na mahadum.
Mahadum ndị mba ọzọ, sitere na Paris Sorbonne ruo Mahadum State University, nọchitere anya nke ọma na UAE. Ogige Abu Dhabi nke Mahadum New York mepere n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 2010. Institutionslọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa na-enye ọtụtụ mmụta pụrụ iche gụnyere INSEAD, thelọ Akwụkwọ Ihe Nkiri nke New York, Schoollọ Akwụkwọ Gọọmentị Dubai, leumlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmanụ Ala, na Masdar Institute of Science and Technology.
Enyemaka nlekọta ahụike na UAE bụ ihe zuru ụwa ọnụ, nlekọta na tupu mgbe ọmụmụ na mgbe ọmụmụ nwa nọ na mba ndị mepere emepe. N’ihi nke a, atụmanya ndụ n’oge ọmụmụ nke afọ 78.5 erutela ọkwa ndị ahụ na Europe na North America.
Mmeghe nke mkpuchi ahụike na Abu Dhabi maka ndị si mba ofesi na ndị ọzọ na-adabere na ya bụ nnukwu ọkwọ ụgbọ ala na mmezi nke usoro ahụike. Na mgbakwunye, atụmatụ gọọmentị na-agba mbọ iji hụ na ndị Amirati na ndị si mba ọzọ nọ na mba ahụ ga-ekpuchi mkpuchi mkpuchi ahụ ike nke mmanye n'okpuru usoro mmado ejikọtara ọnụ.
Facilitieslọ ọrụ ahụike abụrụla ọkọlọtọ dị elu na UAE, ma, n'agbanyeghị ọnọdụ akụ na ụba, nlekọta ahụike ka bụ ihe itinye ego maka itinye ego n'ọtụtụ gọọmentị na nke onwe na 2009.
A na-ahụta ọgwụ mgbochi na ahụike ọha na eze dị oke mkpa maka ọdịmma ogologo oge nke ndị bi na UAE na-eto eto. Ndị ọkachamara na-ebili n'ọtụtụ ọrịa ndụ na afọ na-abịanụ. Ọ bụ ezie na eji nwayọ na-emebi ihe mgbochi ọdịnala, ha ka na-emetụta nsogbu ndị dị ka cancer. Mmanya mmado maka ụmụ nwanyị nọ n’agbata afọ iri anọ na isii na mmachi a smokingụrụma n’ebe ndị mmadụ nọ bụ ihe atụ nke mbọ a na-eme iji kwalite ahụike ọha na nke a. UAE nwekwara oke ubara shuga na ọrịa obi, ma na - atụpụta atụmatụ iji dozie nsogbu ndị a. Nlekọta ahụike mbụ bụ ngwá ọrụ ọzọ dị mkpa na atumatu ahụike ọha, wee mee ka UAE na-agbasi mbọ ike iji meziwanye.
Ndị na-ahụ maka ahụike ọha na eze na 2009 nwere ike ịma atụ nke ọrịa ezumike (H1N1) nsogbu. Agbanyeghị, ndị isi ahụike atọ - Ministry of Health, the Health Authority - Abu Dhabi na Dubai Health Authority - gbanwere ngwa ngwa n'ụzọ dị irè iji gbochie ọgwụ, njikwa nsogbu na njikwa ọrịa na-etinye atụmatụ dị irè iji chịkwaa ọnọdụ ahụ. .
UAE nwere ọrụ nlekọta ahụike gọọmentị na-akwụ ụgwọ yana ngalaba ahụike nke na-etolite etolite na-ebuputa usoro nlekọta ahụike dị elu na ọnụọgụ ndị mmadụ. N'ọtụtụ akụkụ nke UAE, nnyefe nlekọta ahụike na-enwe mgbanwe dị ukwuu.
Imirikiti ọrịa na-efe efe dị ka ịba, akpịrị na poliomyelis bụbu ndị jupụtara na UAE ka ekpochapụrụ, ebe nlekọta tupu mgbe a na-amụ nwa na mgbe a mụrụ ya nọ na mba ndị mepere emepe n'ụwa: ọnụ ọgụgụ amụmụ ka amụrụ ọhụrụ (neonate). agbadatala 5.54 kwa 1000 na onwu umu aka rue 7.7 kwa 1000. Ọnụọgụ ọnwụ nwa agbadala na 0.01 maka 100,000 ọ bụla.
N'ihi nsonaazụ nlekọta dị elu a na ọkwa niile nke usoro ahụike, atụmanya ndụ na ịmụ nwa na UAE, na 78.3 afọ, erutela ọkwa ndị ahụ na Europe na North America. Ruo ugbu a, gọọmentị akwadowo nlekọta ahụike na UAE, ma ọhaneze. Dịka akụkụ ndị ọzọ, nkwanye ugwu a na-agbanwe agbanwe na mmekọrịta ndị ọha na eze na-adịwanye mkpa.
Iwu ọha na-elekwasị anya n’ịzụlite nhazi na usoro iwu dabere na omume kacha mma, iji bulie ikike ọrụ ahụike nkeonwe yana nke ọha. Na mgbakwunye, usoro iwu ọha na eze ga-ebute ihe ndị ka mkpa maka mmepe ọrụ ọrụ ahụike n'ime mpaghara.
Mgbanwe Ahụike Ahụike na Abu Dhabi
Nnyefe nlekọta ahụike na Abu Dhabi na-enwe mgbanwe dị mkpa nke ga-emetụta ụdị ndị niile metụtara ya: ndị ọrịa (ụmụ amaala na ndị si mba ọzọ), ndị na-eweta ya na ndị na-ahụ maka atụmatụ, na-emesi ịdị mma nke ọrụ na ịkwado usoro ahụ ike. Ebumnuche ndị gbara ọkpụrụkpụ maka Ahụike Ahụike na Abu Dhabi bụ:
Mee ka nlekọta dịkwuo mma, na-echebara ihe mgbe niile echiche, ka ịkwalite ya site na itinye ụkpụrụ ụkpụrụ ọrụ na ebumnuche arụmọrụ maka mmadụ niile.
Andgbasa ohere ịbanye na ọrụ, na-enye ndị niile bi na otu ụdị nlekọta na ikike ịhọrọ ọrụ nlekọta ahụike si otú a na-akwalite ịdị mma site na asọmpi ahịa.
Shigbanwee site na ndị ọrụ ọha na ndị na-enye ndị ọzọ n'enweghị nsogbu ọfụma ma rụọ ọrụ nke ọma ka ndị na-enye onwe ha, kama gọọmentị, mkpa ọrụ nlekọta ahụike, yana ọrụ gọọmentị machibidoro mmepe na itinye iwu nke usoro nlekọta ahụike ụwa.
Mejuputa usoro ego ego ohuru site na usoro ohuru mkpuchi mkpuchi mmachi.
Ndị ọrụ niile, gụnyere ụlọ, na-akwado ndị na-akwado ego. Atụmatụ mkpuchi ahụ ike na-arụ ọrụ maka onwe ndị ọrụ, ka etinyere ya na Abu Dhabi, ga-ebido na mba ahụ dum na 2008. Ngosiputa nke usoro ohuru a na-egosiputa ugwo, mmeghe ugwo, nye ndi nile bi na ha ego na ezi ego maka nlekọta ahu ike na Abu Dhabi.
Ego ọrụ ebere ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka ndị mbịarambịa na-enweghi ego na-enwetakwa ikpuchi ọnọdụ ahụike siri ike karị dịka ọrịa kansa, dialysis, polytrauma na nkwarụ.
A na-emebekwa usoro mkpuchi ọhụrụ ahụike dị na Dubai maka ndị amaala na ndị na-abụghị ndị mba ọzọ na a na-atụ anya na a ga-emecha atụmatụ a n’ofe obodo.
United Arab Emirates bụ otu n'ime ụwa na -agawanye njem nlegharị anya na njem azụmahịa ụwa. Nlekọta ndị Arab na ọdịndị oge oyi dị mma site na akụrụngwa ọyịrị na ihe eji eme klaasị ụwa.
UAE abụrụla ebe a na-eme egwuregwu zuru ụwa ọnụ maka nnọkọ, ihe ngosi mpaghara na nke mba ụwa na nnukwu ihe egwuregwu ụwa dị ka Dubai World Cup maka ịgba ọsọ, Abu Dhabi Formula One Grand Prix, Dubai Desert Classic Golf Tournament, FIFA Klọb World World, ememme ịse ihe nkiri n'ụwa na Dubai yana Abu Dhabi, yana mgbakwunye na White House, Nnọkọ Mgbasa Ozi Ọchịchị zuru ụwa ọnụ. Ndi UAE meriela iji kwado 2020 World Ihe ngosi.
Onye nnọchi anya United Kingdom kacha nwee njem na ntanetị, expedia.co.uk, họrọ Abu Dhabi dị ka otu n'ime njem njem 10 kachasị elu n'ụwa na 2008. Internationalgbọ elu Dubai International nwetara ihe nrite maka ọdụ ụgbọ elu Middle East na 2012 World Travel Awards.
Enwere otutu ihe ime na UAE gabiga Dubai na Abu Dhabi. Nke izizi biri n'oge ọgbọ ọla, Sharjah bụ isi obodo ọdịbendị nke ndị isi ala. Mpaghara ihe nketa nke Sharjah City gunyere Maritime Museum, ụlọ Alakụba Alakụba na ihe ngosi nka maka ọdịnala ọdịnala na nke oge a, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ajman na-adọta ndị ọbịa mba dị iche iche nwere ọmarịcha osimiri, dịkwa ka Fujairah nke na-enyekwa snorkeling na ndakpu mmiri na njem nlegharị anya na Musandam Peninsula, nke ama ama maka agwa a na-akọwaghị agwa ya, oke okwute na coral reefs.
Ras Al Khaima, na ókèala ya na Oman, bụ ihe ama ama ama n'etiti ndị njem na mpaghara njem maka ugwu ugwu Hajjar.
Visa / Paspọtụ Maka toga UAE
All India na Indian akwụkwọ ikike ngafe ruru ihe karịrị ọnwa isii nwere ike ịbanye na UAE.
2) Visa na Diplomatia na Official Passpaili
Thelọ ọrụ njem obibi ahụ na-enye visa na Diplomatik na nke Paspọtụ Isi. Akwụkwọ ndị achọrọ maka nke a bụ:
Verbile si na ngalaba na-ahụ maka ihe omume India (ma ọ bụrụ na ndị isi ọchịchị Gọọmentị India) ma ọ bụ site na ndị nnọchi anya Diplomatik (ọ bụrụ na ndị nnọchi anya Dọkịnta ma ọ bụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Mgbasa Ozi) .Mgbe a ga-esonye na ndetu verbile kwesịrị ịdị n'otu ọnwa. ụbọchị nke ọ bipụtara.
Tydị akwụkwọ anamachọipu ka ọdee akwụkwọ Ozi Isi
Emezughị visa Agaghị anabata akwụkwọ anamachọihe.
Onye ga-etinye akwụkwọ Visa akwụkwọ ga-etinyerịrị ohere o nyere maka mbinye aka ya.
Mmechi nke Onye nkwado na UAE bụ ihe achọrọ.
Govt. Ndị ọrụ gọọmentị kwesịrị ikwuputa Nnabata nke Onye nkwado dị ka onye nnọchianya ha ma ọ bụ Consulate na UAE, yana Ebumnuche nke ntinye na Adreesị zuru ezu.
Detuo Paswọdu agba (Akwụkwọ ibe, Data nkeonwe & ofbọchị nke Mmebi) na Coverpage (agba).
Otu foto paspọtụ gbara agba (A ga-ekenye ya).
3) Visa onye njem maka njem gaa UAE
Assylọ ọrụ UAE anaghị enye visa na paspọtụ nkịtị.
Onye nkwado na UAE ga-ahazi visa onye India, na-ejigide paspọtụ nkịtị, onye nkwado na UAE. Enwere ike ịnweta ya na ntinye akwụkwọ nkwari akụ na UAE ma ọ bụ site na Airlineslọ Ọrụ ụgbọ elu Emirates ma ọ bụ Arabialọ Ọrụ Air Arabia ma ọ bụ site na Onye Njem Njem na India.
4) Nkagbu nke Visa
Assylọ ọrụ nke UAE anaghị akwusi visa.
Iji kagbuo visa gị, ị kwesịrị ịkpọtụrụ onye na-akwado gị na UAE bụ onye mere gị visa ahụ. Onye na-akwado gị nwere ikike naanị iji kagbuo visa mbụ gị. Enweghị kagbuo visa mbụ gị, ịnweghị ike ịnweta visa UAE ọhụrụ na ịnweghị ike ịga UAE.
Usoro maka Mfu Passport, nke nwere visa ezumike nka UAE.
Ọ bụrụ na mfu nke paspọtụ India nwere ezigbo visa bi na UAE, ọ ga-adị mkpa itinye akwụkwọ ndị na-esonụ na Counlọ Ọrụ Etinye Aka:
Mpempe akwụkwọ Mkpofu Mpempe akwụkwọ Mpempe akwụkwọ (Na pedlọ Akwụkwọ Ozi Nọmba), na nọmba kọntaktị abụọ ahụ (na ala nke mpempe akwụkwọ).
Mpempe akwụkwọ na-acha agba agba ochie na nke ọhụrụ.
Mpempe akwụkwọ na-acha odo odo UAE UAE Visa.
Akwụkwọ ozi sitere n'aka onye nkwado na UAE, na-ekwupụta na onye na-achọ arịrịọ hapụrụ UAE ya ikike ya.
Mpempe akwụkwọ akụkọ mbụ ndị uwe ojii ma ọ bụ FIR na Bekee, nke Ministrylọ Ọrụ Mpụga Na-ahụ Maka Na-ahụ Maka Ihe Indian na-agba akaebe (ụbọchị nke FIR ga-abụ tupu ụbọchị mbipụta akwụkwọ ikike ọhụrụ ahụ).
AKWICKWỌ uwe ojii nke ndị uwe ojii kwuru banyere paspọtụ furu efu nke nwere akara nke ntụgharị asụsụ Arabik.
Otu Paswọdu Nke Agba agba.
Eegwọ nke Dh 300 / -.
Ozugbo edere akwụkwọ ndị a na UAE Ofishin Counlọ Ọrụ UAE, a ga-agwa onye na-achọ arịrịọ mgbe ikike ịbanye dị njikere.
Omume / itinye iwu nke akwụkwọ
1) Nleba / Ndebanye nke Akwụkwọ
Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike itinye akwụkwọ ha nke OWN, ma ọ bụ akwụkwọ nke BLOOD RELATIVES ha, gosipụtara ihe ngosi nke njirimara na ihe akaebe nke nnabata. Enwere ike itinye akwụkwọ ederede nke ndị enyị naanị otu site na ndị ọrụ nyere ikike.
Enwere ike itinye akwụkwọ ederede maka azụmahịa site n'aka ụlọ ọrụ nyere ikike - Ndị ọrụ. Akwụkwọ ozi ikike na Letterhead Company (ya na aha nke yeelọọrụ na akàrà nke ụlọ ọrụ) yana njiri ụlọ ọrụ achọrọ na nke a.
2) Nzọụkwụ maka Nleba / Legalization nke Akwụkwọ
A ga-ebu ụzọ gbaa akwụkwọ niile nke Ngalaba Consular nke oflọ Ọrụ Mpụga India, wee banye na Ngalaba Consular, Vasant Kunj, New Delhi. Biko rịba ama na ọ dị mkpa ka ndị ọrụ Ozi Mmụta nke steeti ahụ metụtara gosipụta akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ tupu 'akwụkwọ ozi dị na mpụga. Maka ịgba akaebe na Ngalaba Consular, UAE Dirham 156.06 bụ ego maka akwụkwọ ọ bụla, oge ahụ bụ 9: 00 AM rue 2: 00 PM, Mọnde ruo Thursday, na 9: 00 AM ruo 12: 00 PM na Fraịde. Enwere ike ị nweta akwụkwọ ahụ n'otu ụbọchị ahụ, n'etiti 3: 00 na 4: 00 PM, Mọnde ruo Thursday, na 2: 30 PM na 3: 30 PM na Fraịde. Maka ajụjụ ọ bụla, biko zitere anyị ozi email na: consular@uaeembassy-newdelhi.com
Asambodo ndị ọzọ dị ka alụmdi na nwunye, ọmụmụ, ahụmịhe, nkwuputa akwụkwọ, FIRS nke paspọtụ furu efu, akwụkwọ azụmahịa, wdg kwesịrị ka Ministri nke mpụga nke India wee gbaa akaebe. Usoro ndị ọzọ dị otu a. Forgwọ maka akwụkwọ azụmahịa ahụ na-adabere n'okwu ahụ na ego maka akwụkwọ ọnụahịa ahụ dabere na ọnụahịa akwụkwọ ọnụahịa. Biko kpọtụrụ ngalaba nnọchi anya ndị nnọchi anya mgbasa ozi nke UAE ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla.
3) forgwọ maka Nleba Anya nke Akwụkwọ
Gwọ na UAE Dirham
Akwụkwọ Nkụzi (diplọma, ogo, asambodo ụlọ akwụkwọ)
Akwụkwọ Asambodo Nlere tupu
Asambodo Ntanetị nke Mba
Madrasa digri na asambodo
Akwụkwọ Asambodo Nkuzi
Asambodo Nlele Anya
FIR nke ọnwụ paspọtụ
Ike nke Attorney (Personal)
Asambodo Ahụike Phytosanitary
Asambodo Nnyocha Ọgwụ
Asambodo agwa ndi uwe ojii
Akwụkwọ Asambodo Onye Ọchịchị
Mpempe akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, Paspọtụ, wdg.
Esgwọ maka ọnụahịa ọnụahịa na ọnụahịa ọnụahịa
4) Akwukwo Ahia
Emegharia n'etiti ndi mmadu, mgbe ha na-emepe ulo oru
Factorization site na iwere ngwaahịa ahụ, mgbe ere ya n'ime
Factorization site na iwere ngwaahịa ahụ, mgbe ere ya n'èzí
Ike onye ọka iwu imeghe azụmahịa n’ime steeti.
Mgbanwe nke isi obodo.
Okwu mmalite nke onye ọlụlụ ọhụrụ.
Franchise - iguzobe ulo oru
Mepee ngalaba ohuru nke ụlọ ọrụ mba ofesi na steeti.
Mepee ụdị ụlọ ọrụ ọhụrụ nke mba ọzọ na-abụghị
Akwụkwọ ikike azụmaahịa (ebe a na-ekesara ya ihe karịrị otu obodo iji mepee ngalaba na steeti ọ bụla).
Mmezu nke oru ndi a
emechara na ngwụcha nke otu,
n'ime obodo ma ọ bụ ná mpụga obodo.
Mmefu ego nke ụlọ ọrụ
Mmechi nke ụlọ ọrụ
Mmefu ego n’achụmakwụkwọ nke afọ ọ bụla
Akwụkwọ ikike ndị njem
Azụmaahịa Azụmaahịa (Nkeonwe / Ọha)
Mwepu nke Ikikere, Nhazi oge nke Alaka Manager,
Imepe Brnach, Nlekọta nke Quotas
Cert. onye otu ndi isi oche nke ahia.
Nkeji nke Nzukọ nke Ndị isi Nduzi.
Memorandum nke Association nke Companylọ ọrụ ahụ.
Mpempe akwụkwọ ụlọ ọrụ ọ bụla edepụtagoro n'elu.
Changegwọ na-agbanwe n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa ọ bụla
5) forgwọ maka akwụkwọ ọnụahịa
Akwụkwọ nke Omume Ọma
1) Inweta akara mkpisi aka si n’aka Ulo Oche UAE
Iji nweta akwụkwọ mkpesa nke ndị uwe ojii na Emirate of UAE ọ bụla, onye aga-enwerịrị enwetara akara mkpịsị aka ya na ink ojii site n'ọdụ ndị uwe ojii obodo ya, mezie site na Ministri Home nke steeti ya na mgbe ahụ site n'aka Ministri nke Mpụga. Okwu nke India. Adreesị ụlọ ọrụ ha dị na Delhi bụ Ngalaba Consular, Patlọ Patiala, Tilak Marg, na nso ọnụ ụzọ India. Officeslọ ọrụ ndị ọzọ nke Ministry of Foreign Affairs dị na Chennai, Guwahati, Hyderabad na Kolkata. Nwa akwukwo a nwekwara ike ịbịaru nso na Mkpịsị aka mkpịsị aka na Patiala House iji mee mkpịsị aka ya. Mkpesa mkpịsị aka aka gosipụtara ka a ga-edoba ya na Ọdụ Emblọ Ọrụ UAE (ya onwe ya, ma ọ bụ site na ndị ikwu ọbara ya, ma ọ bụ site n'aka ndị nnọchi anya ọ bụla) site na 9: 00 am to 12: 00 pm, Mọnde ruo Fraịdee. Rs.3,750 / - bụ ego maka asambodo IN CASH, a ga-eweghachi akwụkwọ ahụ n'otu ụbọchị ahụ, n'etiti 3: 00 pm na 4: 00 pm.
2) Izipu akara aka diiri na UAE
Ozugbo inwetara akara ngosi akara aka gị site n'aka onye nnọchi anya, ị ga-ezigara ha n'ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị na UAE. Biko tinye ihe ndia.
Mpempe mkpịsị aka ahụ bụ iwu nke ndị nyocha UAE
Mpempe akwụkwọ ikike obibi mbụ gị na UAE
Mpempe akwụkwọ paspọtụ gị na nso nso a
Foto abụọ gbara agba na-acha akwụkwọ ikike
Feesgwọ ọ bụla chọrọ (dabere na ikike)
Ziga ngwugwu gị na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ihe ndị metụtara ime n'okpuru. Tupu izipu dọkụmentị ahụ, biko kpọọ UAE Office iji nata ozi gbasara ụgwọ achọrọ, yana ijide n’aka na ị na-eziga ha na ikike kwesịrị ekwesị.
Ngalaba nyocha nke ndị omekome
Ikikere na Nkebi Asambodo
Ndị uwe ojii Dubai General HQ
Faksị: 971-4-2171512 / 2660151
Ngalaba ndị uwe ojii - Abu Dhabi
Ndị uwe ojii Sharjah
Anyị na-atụ aro izigara ndị enyi nọ na UAE akwụkwọ ahụ, ka enyi gị nwee ike nweta asambodo si n'aka ndị uwe ojii na nnọchite gị. Nke a ga-ebelata oge nhazi ka ejiri zipụ dọkụmentị ozugbo na Ngalaba ndị uwe ojii.
Ndepụta Mgbochi Ọgwụ na UAE
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ọgwụ na ọgwụ a na-achịkwa, ndị Ministry of Health na UAE debanyere aha ya ma ọ bụ ndị Ministry nke ime na Narlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa Mba International (INCB) debere ya.
Enwere ike ịgara nyocha ndị ọzọ na Ngalaba Njikwa Ọgwụ na UAE nke Abu Dhabi, PO Box 848, Faksị: + 971 2 6313 742.
Ndepụta ndị a na-egosi ọnụ ọgụgụ nọmba, aha ahịa, aha njirimara yana ụdị ọgwụ.
Mkpanaka 1, 123 COLD mbadamba, Codeine phosphate 8mg, Acetaminophen 325mg, Cafeine 30mg, Carbinoxamine nwoke 3.06mg, Phenylephrine 5mg, Mbadamba
2, ABILIFY 10mg, Aripiprazole 10mg, Mbadamba
3, ABILIFY 15mg, Aripiprazole 15mg, Mbadamba
4, ABILIFY 20mg, Aripiprazole 20mg, Mbadamba
5, ABILIFY 30mg, Aripiprazole 30mg, Mbadamba
6, ACTIFED compound linctus, Codeine Phosphate10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg / 5ml, Linctus
8, ACTIVELLE, Estradiol & Norethisterone, Mbadamba
9, ADOL oyi, Dextromethorphan HBr 15mg, Pseudoephedrine HCL 30mg, Paracetamol 325mg, Caplets
11, ADOL compound, Codeine phosphate 10mg, Paracetamol 150mg, Cafeine 50mg, Salicylamide 200mg, Mbadamba ụrọ
12, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, Mbadamba ụrọ
14, AKINETON RETARD 4mg, Biperiden HCL 4mg, Mbadamba ụrọ
15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Mbadamba ụrọ
17, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 mg, Mbadamba
18, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 mg, Mbadamba
19, ANAFRANIL SR 75, Clomipramine HCL 75 mg, Mbadamba ụrọ
23, ARTANE 2, Benzhexol HCL 2 mg, Mbadamba
24, ARTANE 5, Benzhexol HCL 5mg, Mbadamba
25, ARTHROTEC 50, Misoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, Mbadamba ụrọ
26, ATIVAN 1, Lorazepam 1mg, Mbadamba ụrọ
28, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, Mbadamba
29, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, Mbadamba
30, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, Mbadamba
32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Mbadamba
35, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg, Ephedrine HCl 7.5mg, Chlorpheniramine male 1.25mg / 5ml, Ngwakọta
36, BRONCHOLAR forte, Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg, Guaifenesin 50mg, Chlorpheniramine male 1.25mg / 5ml, Ngwakọta
38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, Mbadamba
39, BUSPAR 10, Buspirone HCL 10mg, Mbadamba
40, BUSPAR 30 mg, Buspirone HCl 30 mg, Mbadamba Dividose
41, BUSPAR 5, Buspirone HCL 5 mg, Mbadamba
42, CAMCOLITE 250, Lithium Carbonate 250mg, Mbadamba
43, CAMCOLITE 400, Lithium Carbonate 400mg, Mbadamba
44, CANTOR 50, Minaprine 50mg, Mbadamba
47, CIPRALEX 10mg, Escitalopram (dị ka Escitlopram oxalate) 10mg / mbadamba, Mbadamba ụrọ
48, Cipralex 10mg, Escitalopram, Mbadamba ụrọ
49, CIPRALEX 15mg, Escitalopram (dị ka Escitlopram oxalate) 15mg / mbadamba, Mbadamba ụrọ
50, Cipralex 15mg, Escitalopram, Mbadamba ụrọ
51, CIPRALEX 20mg, Escitalopram (dị ka Escitlopram oxalate) 20mg / mbadamba, Mbadamba ụrọ
52, Cipralex 20mg, Escitalopram, Mbadamba ụrọ
53, CIPRALEX 5mg, Escitalopram (dị ka Escitlopram oxalate) 5mg / mbadamba, Mbadamba ụrọ
54, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, Mbadamba
55, CLIMEN, Micronised Estradiol Valerate (pink) 2mg / 1tab, Micronised Estradiol Valerate (ọcha) 2mg / 1tab, Micronised Cyproterone Acetate (Pink) 1mg / 1 tab.
56, CLOPIXOL 2, Zuclopenhtixol diHCL 2mg, Mbadamba ụrọ
57, CLOPIXOL 25, Zuclopenhtixol diHCL 25mg, Mbadamba ụrọ
59, CLOPIXOL Depot 200, Zuclopenhtixol belata 200mg / ml, Injection
61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Mbadamba ụrọ
69, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Guaifenesin 100mg, Mbadamba ụrọ
70, CODIS, Aspirin 500 mg, Codeine Phosphate 8 mg, Mbadamba ụrọ
72, CYTOTEC, Misoprostol 200mcg, Mbadamba
73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Mbadamba ụrọ
77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Mbadamba
80, DHC CONTINUS, Dihydrocodeine tartrate 60mg, Mbadamba ụrọ
83, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, Mbadamba
84, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, Mbadamba
85, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, Mbadamba
86, DIARSED, Diphenoxylate HCL 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Mbadamba ụrọ
87, DIAXINE, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Mbadamba ụrọ
88, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, Mbadamba
89, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, Mbadamba
93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Mbadamba
95, DOGMATIL 25mg / 5ml, Sulpiride 25mg / 5ml, Ngwọta
97, DOGMATIL Forte, Sulpiride 200 mg, Mbadamba ụrọ
98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Mbadamba
101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Mbadamba
102, DORSILON, Mephenoxalone 200mg, Paracetamol 450mg, Mbadamba ụrọ
103, EDRONAX 4mg, Reboxetine 4mg, Mbadamba ụrọ
104, EFEXOR 37.5, Venlafaxine 37.5mg, Mbadamba
105, EFEXOR 75, Venlafaxine 75mg, Mbadamba
108, ESTRACOMB TTS, Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 30mg (Patch 1) + Oestradiol 10mg (Patch 2), Pat
109, ESTRADERM TTS 100, Estradiol 8mg / 20cm2, Pat
110, ESTRADERM TTS 25, Estradiol 2mg / 5cm2, Pat
111, ESTRADERM TTS 50, Estradiol 4mg / 10cm2, Pat
112, ESTROFEM, Oestradiol 2mg, Mbadamba ụrọ
113, ESTROFEM FORTE, Oestradiol 4mg, Mbadamba ụrọ
114, FAVERIN 100, Fluvoxamine maleate 100mg, Mbadamba
115, FAVERIN 50, Fluvoxamine maleate 50mg, Mbadamba
116, FEMOSTON 2 / 10, Dydrogesterone (Y) 10mg, Estradiol (O) 2.0mg, Estradiol (Y) 2.0mg, Mbadamba
117, FLEXIBAN, Cyclobenzaprine HCL 10mg / tab., Mbadamba
118, FLUANXOL 0.25, Flupenthixol 0.25mg, Mbadamba
119, FLUANXOL 0.5, Flupenthixol 0.5mg, Mbadamba
120, FLUANXOL 1, Flupenthixol 1mg, Mbadamba
121, FLUANXOL 3, Flupenthixol 3mg, Mbadamba
127, FLUXETYL 20mg, Fluoxetine (dị ka F. Hydrochloride) 20mg / capsule, Capsules
128, FRISIUM 10, Clobazam 10 mg, Mbadamba ụrọ
129, FRISIUM 20, Clobazam 20 mg, Mbadamba ụrọ
131, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU / 1Cartridge, Powder for Injection
132, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU / 1Cartridge, Powder for Injection
133, HALDOL 0.5, Haloperidol 0.5mg, Mbadamba
134, HALDOL 2mg / ml, Haloperidol 2mg / ml, Mbelata
135, HALDOL 5, Haloperidol 5mg, Mbadamba
141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Mbadamba
142, INTARD, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Mbadamba ụrọ
148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, Mbadamba ụrọ
151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg, Norethisterone 1mg, Mbadamba ụrọ
152, LAGAFLEX, Carisoprodol 300 mg, Paracetamol 250mg, Mbadamba ụrọ
154, LARGACTIL 10, Chlorpromazine HCL 10mg, Mbadamba ụrọ
155, LARGACTIL 100, Chlorpromazine HCL 100mg, Mbadamba ụrọ
156, LARGACTIL 25, Chlorpromazine HCL 25mg, Mbadamba ụrọ
158, LARGACTIL 50, Chlorpromazine HCL 50mg, Mbadamba ụrọ
161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, Mbadamba
162, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, Mbadamba
163, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, Mbadamba
165, LIORESAL 10, Baclofen 10 mg, Mbadamba
166, LIORESAL 25, Baclofen 25 mg, Mbadamba
167, LOMOTIL, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Mbadamba ụrọ
168, LUDIOMIL 10, Maprotiline HCL 10mg, Mbadamba ụrọ
169, LUDIOMIL 25, Maprotiline HCL 25mg, Mbadamba ụrọ
170, LUDIOMIL 50, Maprotiline HCL 50mg, Mbadamba ụrọ
171, LUDIOMIL 75, Maprotiline HCL 75mg, Mbadamba ụrọ
173, MELLERIL 10, Thioridazine HCL 10mg, Mbadamba
174, MELLERIL 100, Thioridazine HCL 100mg, Mbadamba
175, MELLERIL 25, Thioridazine HCL 25mg, Mbadamba
176, MELLERIL 50, Thioridazine HCL 50mg, Mbadamba
178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg, Paracetamol 450mg, Mbadamba
179, MYOGESIC, Orphenadrine 35mg, Paracetamol 450mg, Mbadamba ụrọ
184, NOCTRAN 10, Clorazepate dipot potassium 10mg, Acepromazine maleate 1.016mg, Aceprometazine maleate 10.16mg, Mbadamba
185, NORACOD, Codeine 10mg, Paracetamol 500mg, Mbadamba ụrọ
186, NORCURON 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / ampoule, ntụ ntụ maka injection
187, NORCURON 4mg, Vecuronium Bromide 4.0mg / ampoule, ntụ ntụ maka injection
190, NORDITROPIN Pen setịpụrụ 12, Somatropine 12 IU, Injection S / C
191, NORDITROPIN Pen setịpụrụ 24, Somatropine 24 IU, Injection S / C
5mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj na pen gbara
10mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj. na Pen dechara
15mg / 1.5 ml, Somatropin, Inj. na Pen dechara
199, NORFLEX 100, Orphenadrine citrate 100mg, Mbadamba
200, NORGESIC, Orphenadrine citrate 35mg Paracetamol 450mg, Mbadamba ụrọ
203, Nuvaring, Etonogestrel & Ethinylestradiol, Mgbanaka Vaginal
204, ORAP, Pimozide 1mg, Mbadamba ụrọ
205, ORAP Forte, Pimozide 4mg, Mbadamba ụrọ
206, OXETINE, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Mbadamba ụrọ
208, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg, Paracetamol 500mg, Mbadamba ụrọ
211, PHYSEPTONE 5, Methadone HCL 5mg, Mbadamba
212, PREPULSID, Cisapride 1mg / ml, nkwusioru
213, PREPULSID, Cisapride 30mg, ọkọnọ.
214, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, Mbadamba ụrọ
215, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, Mbadamba ụrọ
216, PRIMOTESTONE depot 100mg, Testosterone Enanthate 110mg, Testosterone Propionate 25mg, = Testosterone 100mg / ml, Injection
217, PRIMOTESTONE depot 250mg, Testosterone enanthate 250mg / 1ml, Injection
218, PROGYLUTON, Estradiol Valerate 2mg / 11white tab., Estradiol Valerate 2mg & Norgestrol 0.5mg / 10 tab tab., Mbadamba
219, PROKINATE, Cisapride 5mg / 5ml, nkwusioru
220, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, Mbadamba
221, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, Mbadamba
222, PROLIXIN 25mg / ml, Fluphenazine belata 25mg / ml, Injection
223, PRERE, Prostaglandin E2 10mg / pessary, Vaginal Pessaries
225, PROTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, Mbadamba ụrọ
226, PROVIRON, Mesterolone 25mg, Mbadamba ụrọ
227, PROZAC, Fluoxetine 20mg, Mbadamba ụrọ
229, PROZAC Kwa 90mg, Fluoxetine (dị ka F. Hydrochloride) 90mg / capsule, Capsules
232, REMERON 15 mg, Mirtazapine 15mg, Mbadamba
233, REMERON 30 mg, Mirtazapine 30mg, Mbadamba
234, REMERON 45 mg, Mirtazapine 45mg, Mbadamba
235, Remeron Sol Tab 30mg, Mirtazapine, Mbadamba ụrọ
236, REVACOD, Codeine Phosphate 10mg, Paracetamol 500mg / 1 tab., Mbadamba
239, RISPERDAL 1, Risperidone 1mg, Mbadamba
240, RISPERDAL 1mg / ml, Risperidone 1mg / 1ml, Ngwọta Oral
241, RISPERDAL 2, Risperidone 2mg, Mbadamba
242, RISPERDAL 3, Risperidone 3mg, Mbadamba
243, RISPERDAL 4, Risperidone 4mg, Mbadamba
244, Risperidal Consta 25mg, Risperidone, Inj / nkwusioru
245, Risperidal Consta 37.5 mg, Risperidone, Inj / nkwusioru
246, Risperidal Consta 50 mg, Risperidone, Inj / nkwusioru
247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Mbadamba ụrọ
248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg / 1tab., Mbadamba ụrọ
250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, Mbadamba
252, RIVOTRIL 2, Clonazepam 2mg, Mbadamba
258, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, Mbadamba
259, ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg, Aspirin 325mg, Mbadamba ụrọ
261, ROMILAR 1.5%, Dextromethorphan 15mg / ml, Nwụda
273, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, Mbadamba ụrọ
274, SERENACE 0.5, Haloperidol 0.5mg, Mbadamba
275, SERENACE 1.5, Haloperidol 1.5mg, Mbadamba
276, SERENACE 10, Haloperidol 10mg, Mbadamba
277, SERENACE 5, Haloperidol 5mg, Mbadamba
278, SEROQUEL 100 mg, Quetiapine 100 mg, Mbadamba
279, SEROQUEL 200 mg, Quetiapine 200 mg, Mbadamba
280, SEROQUEL 25 mg, Quetiapine 25 mg, Mbadamba
281, PackOQUEL Starter Patient Pack, Quetiapine 100 mg / tab. Mbadamba ụrọ 2) Quetiapine 25 mg / tab. Mbadamba ụrọ 6)
282, SEROXAT 20, Paroxetine 20mg, Mbadamba ụrọ
283, SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Mbadamba ụrọ
284, SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Mbadamba ụrọ
285, SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Mbadamba ụrọ
286, SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Mbadamba ụrọ
287, SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Mbadamba ụrọ
288, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, Mbadamba
289, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, Mbadamba
290, SOMADRYL compound, Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg, Caffeine 32mg, Mbadamba
293, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, Mbadamba ụrọ
294, ST.JOSEPH ụkwara, Dextromethorphan HBr 0.1179% w / w, Syrup
298, STELAZINE 1, Trifluoperazine 1mg, Mbadamba
302, STELAZINE 5, Trifluoperazine 5mg, Mbadamba
304, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg, Mbadamba
305, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 5mg, Mbadamba
308, STERANDRYL RETARD 250mg, Testosterone Hexahydrobenzoate 125mg, Trans-hexahydroterephtalate nke n-butyl na Testosterone 125mg / ampoule, Injection
310, STESOLID, Diazepam 2mg, Mbadamba ụrọ
311, STESOLID, Diazepam 5mg, Mbadamba ụrọ
315, STILNOX 10mg, Zolpidem Tartrate 10mg / 1 tab., Mbadamba
317, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg / 1tab., Mbadamba ụrọ
318, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg / 1tab., Mbadamba ụrọ
319, SURMONTIL 25, Trimipramine maleate 35mg, Mbadamba
326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Mbadamba ụrọ
327, TIAPRIDAL 100, Tiapride 100mg, Mbadamba
329, TICLID, Ticlopidine 250mg, Mbadamba ụrọ
331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Mbadamba
332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Mbadamba
333, TRAMAL 100mg, Tramadol 100mg, ọkọnọ.
335, TRAMAL 100mg / ml, Tramadol 100mg / ml, Ibelata
338, TRAMAL Retard 100, Tramadol 100mg, Mbadamba
339, TRAMUNDIN RETARD 100 mg, Tramadol 100mg, Mbadamba
340, TRAMUNDIN RETARD 150 mg, Tramadol 150mg, Mbadamba
341, TRAMUNDIN RETARD 200 mg, Tramadol 200mg, Mbadamba
344, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, Mbadamba ụrọ
345, TRISEQUENS, Oestradiol 2mg (taabụ na-acha anụnụ anụnụ), Oestradiol 2mg, Norethisterone acetate 1mg (tab tab), Oestradiol 1mg (tab tab)
346, TRISEQUENS forte, Oestradiol 4mg (tab tab), Oestradiol 4mg, Norethisterone acetate 1mg (ihe na-acha ọcha), Oestradiol 1mg (tab tab)
347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Mbadamba ụrọ
349, TUSSIFIN nwere codeine, Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg, Glyceryl guaicolate 1gm, Sodium benzoate 3gm, Potassium citrate 3gm, Liquorice 7.5gm / 100ml, Syrup
356, VALIUM 10, Diazepam 10mg, Mbadamba
357, VALIUM 2, Diazepam 2mg, Mbadamba
358, VALIUM 5, Diazepam 5mg, Mbadamba
359, VECURONIUM BROMIDE IHE INJECTION 10mg, Vecuronium Bromide 10mg / 1 vial, Powder for Injection
360, VECURONIUM BROMIDE IHE INJECTION 20mg, Vecuronium Bromide 20mg / 1 vial, Powder for Injection
363, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Mbadamba ụrọ
364, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Mbadamba ụrọ
366, XANAX 0.25, Alprazolam 0.25 mg, Mbadamba
367, XANAX 0.5, Alprazolam 0.5 mg, Mbadamba
368, XANAX 1, Alprazolam 1 mg, Mbadamba
369, Zeldox 20mg / ml, Ziprasidone, Inj / ntụ
370, ZOLOFT, Sertraline 50mg, Mbadamba ụrọ
371, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Mbadamba
373, ZYPREXA 5 mg, Olanzapine 5 mg, Mbadamba
374, ZYPREXA 7.5 mg, Olanzapine 7.5 mg, Mbadamba
OGWU Gọọmenti / OZI EGO
Obodo Abu Dhabi Isi Ọchịchị
Ajman Chamber of Commerce & Industry Planninglọ Ọrụ Atụmatụ
Obodo Abu Dhabi Ministry of Agriculture
Ndị ọrụ nchekwa obodo Civil Dubai Ngalaba Atọm Energy
Chamlọ ahịa azụmaahịa nke Dubai Ministry of Chemical & fatịlaịza
Obodo Dubai Ministry of Civil Aviation
Ndi otu ahia ndi UAE Industrylọ ọrụ aka Ministri ahia na ahia
Ministry of Economy & Commerce Ozi Nkwukọrịta
Ministry of Electric & Mmiri Oru nke ulo oru
Ministry of Health Ministry of Consumer Affairs & Nkesa Ohaneze
Ministri nke ala maka okwu Kabinet Ozi Omenala
Ministry of Education & Ntorobịa Ozi Mbipụta
Ministri ego na ulo oru Ministri gburugburu na oke ohia
Ozi nke atụmatụ Ozi Mpụga
Obodo Sharjah Ulo uka ego
Jahlọ ahịa azụmaahịa na Sharjah Ministri nke Processlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nri
Ọchịchị UAE Ministri Ahụike na Ahụike Ezinaụlọ
Njikọ akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọdịbendị UAE na India, nke malitere n'ihe karịrị otu narị afọ gara aga, etoola ma nwee ọtụtụ. Azụmaahịa abụọ na-etolite n'ike n'ike kemgbe ọtụtụ afọ na kọntaktị ndị mmadụ na-abawanye mgbe niile. Ndị njem si n'akụkụ abụọ na-eleta maka ntụrụndụ na obi ụtọ, ọnụ ọgụgụ ndị UAE na-arịwanye elu na-enweta nlekọta ahụike na ụlọ ọrụ njem na India.
A ga-ekpebi njikọ dị n'etiti obodo ndị India na ndị amaala site n'eziokwu ahụ bụ na obodo ndị India bụ obodo kacha biri na UAE, ọnụọgụ dị nde 1.5. Ọbụbụenyi siri ike nke mmekọrịta dị n'etiti UAE na India dị njikerewanyewanye ma nwekwaa ike n'ime ọnwa na afọ ndị na-abịanụ.
Nsonazụ nke ajụjụ ọnụ nke onye nnọchi anya India na UAE Talmiz Ahmed.
Mmekọrịta dị n'etiti UAE na India siri ike ma dabere na kọntaktị ọdịbendị n'etiti ndị obodo abụọ a. Kedu ihe jikọrọ mba abụọ ahụ na kedu atụmatụ ọhụụ iji wusie nkekọ ọdịbendị na ọdịnala ha ike?
Mmekọrịta India na UAE na-aga n’ihu. Mba abụọ ahụ nwekọrọ mmekọrịta nke ọdịbendị ma nwee njikọ azụmahịa siri ike na nke ọdịbendị. Njikọ anyị na-agbasawanye na-ekpuchi usoro akụ na ụba, teknuzu, mmekọrịta na ọdịbendị na-aba uru maka otu abụọ.
Oge nlebara anya maka mmekọrịta na-eto eto nke India na mba ndị Gulf, karịsịa UAE, site na nleta nke Mịnịsta Ofesi Shaikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan na India na June. N'oge nleta ahụ, akụkụ abụọ ahụ nwere mkparịta ụka bara ụba ma nwee nnukwu mkparịta ụka n'ọtụtụ dịgasị iche iche, gụnyere mmekọrịta abụọ, ọnọdụ mpaghara, nchedo, nchebe na ume ọhụrụ. Site n'akụkụ ndị India, Minista ahụ na-ahụ maka Mpụga Pranab Mukherjee na Minista Azụmaahịa na Mmepụta Kamal Nath gara UAE na Mee na Eprel 2008, n'otu n'otu.
Ọ bụghị naanị akụkụ azụmahịa na nke akụ na ụba kpebiri mkpebi mmekọrịta anyị. Ndị India nọ na UAE ogologo oge tupu achọpụta mmanụ ma rụọ oke ọrụ na mmepe obodo. Ha bụ ndị na - eso ndị ọbịa nke Emirati. Ndị isi UAE ekwuputala oge dị iche iche onyinye ndị India nyere na ngalaba dị iche iche.
Gini bu nmeghari n’omume azumahia na ahia n’etiti mba abuo?
India na UAE na-agbasi mbọ ike imezigharị ma mee ka mmekọrịta akụ na ụba na azụmahịa ya sie ike. Mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ abanyela na nnukwu mmekọrịta na mpaghara akụ na ụba na azụmaahịa, ebe UAE pụtara dị ka ahịa nke abụọ kacha ukwuu n'ụwa niile maka ngwaahịa ndị India. N'otu oge ahụ, ndị India apụtawo dị ka ndị na-etinye ego na UAE, na India dị ka ebe dị mkpa maka mbupụ ngwaahịa maka UAE mepụtara.
Kedu ka ahia ahia dị n’etiti mba abụọ ahụ mere n’afọ gara aga? Azụmaahịa na-abụghị mmanụ nke India-UAE ruru $ 29,023.68 na 2007-2008. Uzo ahia abuo maka 2007-2008 gosiputara uto nke 40 site na afo gara aga. Isi ihe ndị a na-ebupụ site na India gụnyere mmanụ ọkụ, mmanụ eke ma ọ bụ nke ọma, ọka, ọla na akwa, ọla, ngwaahịa mmiri, igwe na akụrụngwa, kọfị na ngwaahịa mmanụ, tii na anụ na nkwadebe. Ihe ndị dị mkpa ibubata sitere na UAE gụnyere mmanụ ọkụ, mmanụ mmanụ, eke ma ọ bụ nke a kpụrụ akpụ, okwute ndị dị oké ọnụ ahịa ma ọ bụ nke ọla, sọlfọ na ọla na-enweghị ọla, igwe eletriki na akụrụngwa na akụrụngwa ya, igwe na nchara wdg.
A na - ebubata akụkụ buru ibu nke ndị India na ebubata ya na UAE site na Dubai gaa obodo ndị ọzọ dị na mpaghara dịka Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Yemen na, na mbubreyo, ọbụna na mba ndị East Africa. N'ihi ya, mbupụ na UAE emepeela nnukwu ahịa mpaghara maka ngwaahịa ndị India.
Onwere ihe itu anya maka oganihu na ahia nke abuo ya na itinye onu ya n’etiti mba abuo?
Mmụba dị ukwuu na azụmaahịa azụmaahịa anyị, karịsịa na mpaghara na-abụghị mmanụ, bụ ngosipụta nke uto na omimi nke akụ na ụba abụọ ahụ. Companieslọ ọrụ ndị India na UAE na-arụsi ọrụ ike na ịchụ ego na ọrụ ha na mba abụọ a. Ihe mmekorita a jikọrọ aka na ụfọdụ ụlọ ọrụ dị mkpa sitere na India dịka Tata, Reliance, Wipro, NTPC, Larsen & Toubro, Dodsals na Punj Lloyd. Site n'akụkụ Emirati, ụlọ ọrụ ndị kachasị elu na India bụ Emaar, Nakheel, DP World, wdg N'ọnwa Ọktọba afọ gara aga, ebinye aka n'ime MOU n'etiti Mahadum UAE na Atul Limited nke India maka mmekọrịta aka na ntanetị maka ịnyefe teknụzụ iji guzobe ala-. otu ihe akụrụngwa nke oge nkwụ na Rajasthan.
Gini bu onu ogugu ndi mmadu India na ulo ahia na UAE?
Echere na ihe dị ka nde ndị India 1.5 bi na UAE. Ọ bụghị ọtụtụ hapụrụ obodo na nso nso a. Ihe isi ike zuru ụwa ọnụ bụ nke enyere aka ịkwado ngbanwe ahụ maka ọrụ ịkọ nkọ na-enweghị nnukwu mmetụta na isi ọrụ, akụrụngwa na ọrụ ụlọ na-achụ na mba ahụ, ọkachasị na Dubai na Abu Dhabi, ebe ego dị ngwa ngwa maka ụdị ọrụ mmepe obodo dị otú a. N'ihi ya, nsogbu akụ na ụba ugbu a bụ eleghi anya na ọ nwere nnukwu mmetụta ọ bụla na mbanye ndị India.
Kedu ọnọdụ njem dị n'etiti mba abụọ a?
Mpaghara njem nleta bu otu n’ime mpaghara nwere ezigbo ikike itolite n’ọdịnihu, ọkachasị njem njem ahụike. Imaratis na -aga India na-eji ọrụ ahụike ndị India eme ihe, gụnyere ụlọ ọrụ ahurvedic na spas. Mpaghara ozo nke nwere nkwekorita ndi ozo na njem bu ime ihe na nlezi anya nke nleta. Enwere ezigbo UAE itinye ego na ngalaba njem na India niile, nke ga - enyere aka ịdọta ndị njem na-eleta UAE na India.
A ga-enwe oge ọhụụ, ike karịa, na mmekọrịta nke UAE-India n'ọdịnihu?
Ntughari uche banyere ọnọdụ ụwa, njikọ dị n'etiti India na UAE na-enweta akụkụ ọhụrụ. Mba abụọ ahụ emebewo mmekọrịta dị iche iche siri ike na azụmahịa na azụmaahịa. Mmekorita a na-abawanye, na-abawanye ma na-abata na mmekorita di omimi ma mesie ya ike na imekorita, ike, wdg UAE dika agbata obi ka a ga-elebara anya iji bulite nke anyi.
Mba abụọ a nwere ike ịgbakọrita ọnụ na ibe ha na mpaghara maka nchekwa na nsogbu nchekwa wee bụrụ ndị mmekọ na ọgụ ụwa niile megide iyi ọha egwu na mbuso agha.
Ebe ọ bụ na UAE na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ ihe ọmụma dabere na India na-apụta dị ka ndị isi ụwa na mbara, ọrụ ugbo, ọgwụ na teknụzụ sitere na bio, enwere nnukwu nkwado maka imekọ ọnụ na nnyefe teknụzụ, R&D na maka mmekorita. Njikọ ọnụ gbachitere elu gbagotere ọhụrụ na mmega ikuku ikuku India-UAE na ọgbakọ Kọmitii Njikọ Njikọ nke India na UAE nke abụọ. India nwetara nkwado na mba UAE n'ihe banyere iyi ọha egwu, ọkachasị na mwakpo ụjọ a na-akpọ Mumbai na Nọvemba afọ gara aga.
Akụ na ụba & azụmaahịa
Njikọ azụmaahịa dị n’etiti India na UAE adịworị kemgbe. Mmekọrịta akụ na ụba na azụmaahịa Indo-UAE na-atụnye mgbakwunye bara uru na ike na mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ a. UAE na-enwe mmekọrịta akụ na ụba sara mbara na India na India, dabere n'ọdịmma.
Olu ahia abụọ dị ugbu a na-ekwupụta na nke a bụ oge na-atọ ụtọ na akụkọ ihe mere eme mmekọrịta akụ na ụba UAE-India. Dika ochichi nke onu ogugu India bu UAE bu onye nmekorita nke India nke kachasi elu nke ego nke 2008-09, n'otu oge onu ogugu ndi ochichi nke UAE gosiputara India dika onye ha na ahia ahia kacha elu na 2008.
Dika ochichi nke onu ogugu nke India, ahia ahia nke di n’etiti India - UAE maka onodu ego nke Epril 2008 - March 2009 bu $ $ $ 44.53 dika aturu US $ 29.11 n’otu oge n’April 2007 – Mach 2008, mmụba site na 52.95% . Dabere na ọnụ ọgụgụ gọọmentị UAE, na 2008 ndị UAE - ahia ahia India gbagoro 48 pasent site na 2007 iji ruo ihe dị ka ijeri dollar $ 32, na-aza 15 pasent nke ahia mba ofesi zuru ụwa ọnụ.
Mbupu India na UAE tumadi gụnyere ọla edo na ọla, ngwa nri, mkpụrụ osisi, ngwa nri, ngwa injinia, tii, anụ ya na nkwadebe ya, osikapa, akwa ya na uwe na kemịkal. Ihe ndị si India na-esite na UAE bụ ọkachasị ngwa ahịa mmanụ na ọla, ọla edo & ọla ọcha, okwute, okwute dị oke ọnụ na ọla, ngwongwo igwe na akwọ ụgbọ, ngwongwo eletriki na akwọ ụgbọ njem.
A na-ahụkwa ihe itinye ego na UAE na India na-enwe nnukwu mmụba n'afọ ndị na-adịbeghị anya. UAE etinyela ihe karịrị $ 5 ijeri na India site na FDI (Foreign Direct Investment) na FII (Foreign Institutional Investors) nke na-eme ka UAE bụrụ otu n'ime ndị kachasị etinye ego na India. Nnukwu ụlọ ọrụ UAE tinyere ego na India bụ DP ụwa, Emaar Group, Al Nakheel, ETA Star Group, SS Lootah Group, Emirates Techno Casting FZE, RAK Investment Authority, Damas Jewelery na Abu Dhabi Commercial Bank.
Ndia bu kwa onye nke ato n’atinye ego na UAE. Companieslọ ọrụ ndị India dị ka L&T, Punj Lloyd, Hinduja Group, Pioneer Cement, Oberoi Group nke Hotels, enweela ọrụ na UAE. Followinggbaso mmalite nke UAE dị ka nnukwu mbugharị mbupụ, ụlọ ọrụ ndị India apụtawo dị ka ndị ntinye ego dị mkpa na mpaghara azụmaahịa efu dịka Jebel Ali FTZ, ọdụ ụgbọ elu Sharjah, Hamariya Free Zones na Abu Dhbai Industrial City.
Ihe doro anya kpatara njikọ mmekọrịta akụ na ụba Indo-UAE bụ nnukwu ndị India bi na UAE. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị India India 6,5 ​​bi na United States na-ebi ugbu a ma na-arụ ọrụ na UAE, nke gụnyere ihe karịrị 2 pasent nke ndị mba niile na mejupụtara ụlọ ọrụ Emirates nke mba ọzọ buru ibu. Ndị obodo ọzọ kwagara ebe ọzọ na-enyere ndị India aka. Ego niile dị na India site na UAE na 30-2008 bụ ihe dị ka ijeri USD 09 -10, nke bụ ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ego niile sitere na mba GCC gaa India nke dị ihe dị ka ijeri USD 12-32.
Njikọ ikuku n'etiti mba abụọ
Enwere ụgbọ elu 475 karịa kwa izu n'etiti njem dị iche iche na India na UAE, nke Emirates, Etihad, Air Arabia, Kingfisher, Jet Airways, Air India na Air India Express na-ekerịta. N'ime ndị ụgbọ elu mba UAE atọ a (Emirates, Etihad na Air Arabia) na-arụ ọrụ maka ụgbọ elu 304 kwa izu nke na-anọchite anya ihe dị ka 64% nke ngụkọta ụgbọ elu na-arụ ọrụ na mpaghara a.
India na United Arab Emirates na-enwe nkwekọrịta Ọrụ ikuku (ASA). Nkwekọrịta ahụ nyere mba abụọ ahụ ohere ịkọpụta ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ọ bụla maka ọrụ nke ọrụ ha kwekọrịtara na nke obodo nke ha ga-enye ikike na ikike kwesịrị ekwesị.
Mmụta & Mmepe
Mee ka arụmụka sie ike n'etiti ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ UAE na mahadum ndị India na ụlọ ọrụ nyocha dị elu. Kwalite mmekorita nke sayensi, tinyere na mpaghara nke ike imeghari ohuru, mmepe na-adigide, oru ugbo ala, ihe omumu ihe omuma, mmepe obodo na ahuike di elu.
Sheikh Zayed - Onye Nchoputa
Onye omumu ya Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahayan, onye guzobere United Arab Emirates mụrụ na 1918 na Abu Dhabi. Ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụ anọ nke Sheikh Sultan bin Zayed, onye chịrị Abu Dhabi site na 1922 - 1926. Sheikh Zayed so ezinụlọ ya si Abu Dhabi kwaga Al Ain, ebe ọ nwetara agụmakwụkwọ okpukpe ya ma mụta ụkpụrụ nke Islam ma mụọ Koran korị. Sheikh Zayed nwere obi uto n'okwute ma na-enwe ọchụ nta na egwuregwu ndị ọzọ dị ka kamel na ịgba ịnyịnya.
Na 1946, a họpụtara Sheikh Zayed ka ọ bụrụ onye ọchịchị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Abu Dhabi (Al Ain) na n'afọ ndị 20 ahụ ọ nọrọ dị ka onye ọchịchị Al Ain, ọ gbachighị mbọ ọ bụla ịzụlite na imeziwanye obodo nke mpaghara ahụ.
Na 1966, Sheikh Zayed ghọrọ Onye Ọchịchị nke Abu Dhabi ma ka ọ na-arụ ọrụ ịzụlite ala, na-ewu ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na okporo ụzọ, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya na ọhụụ ya nke ọdịnihu tụgharịrị uche ya wee guzobe ịdị n'otu n'etiti ndị isi ala ndị Arab gbara agbata obi. Ọ bụ onye mbụ kpọrọ oku maka nguzobe nke United Arab Emirates ozugbo Britain kwupụtara na ọ ga-ewepụ mpaghara ahụ. Na Disemba 2 nd, 1971, Sheikh Zayed na ndị isi nke ndị isi ala isii gbara agbata obi kwupụtara United Arab Emirates na nrọ Sheikh Zayed mezuru.
Kemgbe e guzobere ya, Sheikh Zayed so ụmụnne ya, ndị isi nke ndị isi ala, na-emeziwanye mba ahụ na gbanwee ya ka ọ bụrụ otu n'ime mba kachasị nwee ọganihu na mpaghara ahụ. O jiri amamihe jikwaa ego mmanụ obodo dị iche iche iji bulie ogo obibi ụmụ amaala na ndị bi na UAE ma nye ha ezigbo ndụ. Ọmụma ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Sheikh Zayed nwere mmetụta na echiche ezi uche dị na ya na n'ime mba ahụ. O nwetara nkwanye ugwu na nsọpụrụ mpaghara na mba ụwa na-enwetụbeghị ụdị ya.
Sheikh Zayed nwụrụ na November 2 nd 2004, mana ọ ka dị ndụ na ebe nchekwa ụwa maka ndị isi dị ukwuu na n'obi na n'uche ndị ya maka ọgbọ na-abịa.
United Arab Emirates bụ obodo gọọmentị nke nọọrọ onwe ha, nke hiwere na 1971. A na-eme mgbalị siri ike nke gọọmentị ya maka ịkwalite Ọganihu UAE na ọganihu na mpaghara niile na iji nye ụmụ amaala UAE niile ndụ kacha mma.
Onye isi ya Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan hoputara ka onye isi ala nke United Arab Emirates na 3rd nke Nọvemba, 2004 mgbe nna nna ya nwụsịrị HH Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, onye bụ onye isi ala mbụ nke UAE .
Isi Iyi: https://www.cpc.gov.ae/en-us/thepresident/Pages/president.aspx
Ọrụ nke Onye Isi UAE
Buru onye isi otu kachasị elu ma jikwaa mkparịta ụka ya.
Kpọkuo kansụl kachasị elu maka nzukọ ma kagbuo ya dịka usoro iwu nke kansul siri kwado na iwu nke dị n'ime ya. A ga-akpọku ndị kansụl ka ha nwee nzukọ oge ọ bụla ndị otu ya rịọrọ ya.
Kpọọ maka nzukọ njikọ aka na kansụl na gọọmentị etiti mgbe ọ bụla ọ dị mkpa.
Banye ma gosipụta iwu gọọmentị, iwu na mkpebi nke ndị kansụl kachasị elu kwadoro.
Họta mịnịsta ala, nabata mwepu ya ma hapụ ya ka ọ gbaa arụkwaghịm site na nkwado nke kansụl kachasị elu, họpụta osote onye isi ala na ndị minista, nabata arụkwaghịm ha ma rịọ ha ka ha gbaa arụkwaghịm n'ọrụ ha na-atụ aro maka praịm minista. onye ozi.
Họta ndị nnọchite anya nke gọọmentị etiti maka gọọmentị etiti na mba ndị ọzọ na ndị nkịtị gọọmentị etiti, na ndị ọrụ agha ewezuga onye isi ala na ndị ọka ikpe nke ụlọ ikpe gọọmentị kacha elu, nabata arụkwaghịm ha ma rịọ ha ka ha gbaa arụkwaghịm mgbe nkwado ahụ. Mgbe a ga - eme ụdị oge a, ịnabata mwepu ma ọ bụ mgbasa ga-eme dị ka usoro iwu si dị na irubere iwu gọọmentị.
Signbanye akwụkwọ ozi nke nnochite anya ndị nnọchite anya ndị nnọchi anya nke Union na mba ndị ọzọ na otu dị iche iche na ịnakwere nzere nke ndị nnọchi anya gọọmentị etiti na ndị nnọchi anya nke mba ọzọ na Union ma nweta akwụkwọ ozi nke nzere. Ọ ga-abịanyekwa aka n'akwụkwọ na nhọpụta nke ndị nnọchi anya ya.
Legide mmezu nke iwu gọọmentị, iwu na mkpebi site n'aka ndị ọrụ gọọmentị etiti na ndị ozi ruru eru.
Nọchite anya gọọmentị etiti n'ime mba na mba ofesi na mmekọrịta mba ụwa niile.
Jiri ikike mgbaghara ma ọ bụ mbelata ntaramahụhụ ma kwado ahịrịokwu nke obodo ahụ dabere na usoro iwu na iwu gọọmentị.
N’igosi ihe ndozi na ihe nrịba ama nke nsọpụrụ, ma ndị nkịtị ma ndị agha, n’usoro iwu ndị metụtara ihe ndozi na ọla ndị dị otú a.
Ike ọgbakọ ndị ọzọ nyere ya ma ọ bụ gosi na ya na-ekwekọ n'iwu a ma ọ bụ n'iwu gọọmentị.
Akụkọ banyere ndu ya Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Ebube ya Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan bụ onye isi nke abụọ nke United Arab Emirates, onye ekwuputara nhiwe ya na 2 nd nke December, 1971. Ọ bụ onye ọchịchị nke iri na isii nke onye isi ala Abu Dhabi, bụ nke kachasị ukwuu na ndị isi obodo asaa mejupụtara gọọmentị ahụ.
Ya Highness weghaara ikike iwu gọọmentị etiti dị ka onye isi ala nke UAE wee bụrụ onye ọchịchị nke onye isi ala Abu Dhabi na 3 rd nke November nke 2004, nọchiri nna ya nwụrụ, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan onye nwụrụ na 2 nd nke Nọvemba nke 2004.
Amuru Ebube ya na 1948 na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke obodo masịrị Abu Dhabi wee nata agụmakwụkwọ izizi ya n'obodo Al Ain, nke bụ mpaghara nchịkwa mpaghara ahụ. Ọ bụ nwa nwoke kachasị ukwuu nke onye nwụrụ anwụ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan na nne ya bụ Her Highness Sheikha Hissa Bint Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.
Mmekorita Ya di elu sitere n'ebo Bani Yas, nke a na-ewere dị ka ebo nke nne maka agbụrụ ndị Arab kacha biri na nke a maara n'oge a ịbụ United Arab Emirates. Agbụrụ a mere ka njikota nke ebo Arab, nke akpọrọ “Bani Yas Alliance”.
Nessdị elu ya gbasoro nna ya nwụrụ, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan n'oge ndụ ya niile. Ọfịs izizi mbụ ọ rụrụ bụ “onye nnọchi anya onye isi na mpaghara ọwụwa anyanwụ, yana onye isi ụlọ ikpe ebe ahụ” na 18 nke Septemba, 1966. Ọkwa a dị nnukwu mkpa na ndụ ya. Mgbe ịdị elu Ya nọ na obodo Al Ain, enyere ya nnukwu ohere ịkpọtụrụ ụmụ amaala UAE kwa ụbọchị, mara nke ọma ọnọdụ ha na ịchọpụta ebumnuche ha na olileanya ha.
A họpụtara ịdị elu ya dị ka onye isi nke onye isi ala Abu Dhabi na 1 st nke February, 1969 na onye isi ngalaba nchekwa. N'ihi ọkwá a, ọ malitere na-eduzi ndị agha nchekwa n'ocheeze ma rụọ ọrụ dị mkpa na mmepe ya ma na-atụgharị ya site na obere ndị nche nchekwa ka ọ bụrụ ndị ọrụ nwere ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ.
Na 1 nke May, 1971, Ebube ya Sheikh Khalifa nwere ọnọdụ nke “onye isi oche nke kansụl mpaghara mbụ maka onye isi Abu Dhabi” ma buru amụma nke nchekwa na ego n'ụlọ ọrụ a.
Followinggbaso nkwupụta nke steeti gọọmentị etiti, Ebube ya rụrụ na mgbakwunye n'ọrụ ya mpaghara ọkwa nke “osote onye isi oche nke ụlọ ọrụ gọọmentị etiti, nke hiwere na December nke 1973.
N’ọnwa Febụwarị nke 1974, na-esochi nhichapụ nke kansụl ime obodo ahụ, Ebube ya ghọrọ onye isi oche mbụ nke kansụl okpuru ọchịchị nke dochiri ụlọ ọrụ onye isi ala ahụ gụnyere ọrụ ya niile.
N’oge ọchịchị ya nke kansụl Executive, Nnukwu Ya na-elekọta ma na-esokwa ọrụ mmepe ndị a na-ahụ n’akụkụ niile nke ndị isi ala Abu Dhabi. Ọzọkwa, ịdị elu Ya enyela nnukwu nlebara anya mmepe na nhazi ọganiihu nke akụrụngwa yana ọrụ nke ọrụ dị iche iche. Ọ gbalịsikwara ike ịrụ otu ngwa nchịkwa ọgbara ọhụrụ, yana usoro mmebe iwu zuru oke, maka nke a bụ ntọala siri ike maka usoro mmepe mmekọrịta ọha na eze na nke akụ na ụba.
Na mgbakwunye na ọrụ ya dị ka onye isi oche nke onye isi ala, Onye Nkwa ya bụ onye na-ahụ maka nguzobe na onye isi nke Abu Dhabi Investment Authority na 1976. Onye isi a na-ahụ maka njikwa ego nke ndị isi obodo ahụ ka ọ bụrụ akụkụ nke ọhụụ maka mmepe nke akụrụngwa ego na nchekwa nke isi mmalite ego maka ọdịnihu.
Otu n'ime isi mmalite nke mmepe mmekọrịta ọha na eze nke ịdị ukwuu ya mere bụ ịmalite nke ndị na-elekọta mmadụ na ngalaba ụlọ azụmahịa, nke a na-akpọkarị "Kọmitii Sheikh Khalifa". Ọrụ nke ngalaba ahụ nyere aka na ị nweta ọganihu nke mmepe mmepe na isi obodo nke Abu Dhabi.
Oke ya kwenyere n'ọkwa nke osote onye ọchịagha UAE nke ndị agha gọọmentị etiti, ebe o lebara anya pụrụ iche ma nwekwuo mmasị na ndị agha. N'ime oge ahụ, nnukwu mmụba mere na ọkwa nke enyem, ọzụzụ na ike iji nweta teknụzụ ọgbara ọhụrụ na usoro ọhụụ nke ịdị elu Ya gbalịsiri ike inye akụkụ niile nke ike ndị dị otú a.
A na-atụnye nnukwu onyinye site na ịdị elu ya na mpaghara ịhazi usoro iwu nke ndị agha, nke dabere na ntuli aka nke iwu kachasị elu nke steeti. Amụma a kachasị mma dabere na ịnabata usoro dị mma, anaghị etinye aka na ihe ndị ọzọ na ịkwanyere ugwu ugwu ùgwù. N'iburu uzo ndia, Highdị elu ya azọpụtaghị mbọ ọ bụla ịdebe iwu nchekwa nke na-ejigide nnwere onwe, ọbụbụeze na mmasị steeti ahụ. Iwu a atụnyela aka na itinye ndị agha UAE n'ọkwá dị elu nke nwetara nsọpụrụ nke ụwa niile.
Mgbe Hisness weghachisịrị n’ọchịchị, atụmatụ mbụ maka ọchịchị nke UAE bidoro n’okpuru ọchịchị ya. Na mgbakwunye, Ebube ya mepụtara atụmatụ maka iwulite ahụmịhe ikike ndị omebe iwu iji gbanwee usoro nke ịhọrọ ndị otu nke kansụl steeti n'ụzọ ga-ejikọta ntuli aka na nhọpụta dịka nzọụkwụ mbụ. Site n'ime nke a, nke a ga-enye ngwụsị nke ụbọchị ịhọrọ ndị otu kansụl site na ntuli aka aka nkịtị.
Nessdị elu ya nwere mmasị na mmemme egwuregwu emere na UAE, ọkachasị football. Ọ na-agba mbọ ịkwado ha ma sọpụrụ ndị otu egwuregwu nke obodo na-enweta mmezu nke obodo, mpaghara na mba ụwa na asọmpi.
Onye nwe ya Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Ebube ya Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum enwetala ikike ikike iwu gọọmentị ya dị ka osote onye isi na Prime Minister nke UAE na Jenụwarị 5 nke 2006 mgbe ndị otu nke Supremelọ Ome Iwu Federal na Ndị Isi nke Emirates họpụtara. Kemgbe a họpụtara ya, gọọmentị etiti nke UAE ahụla ngwangwa dị egwu nke ọnụego mmezu ya na nnukwu mmụba na atụmatụ gọọmentị ime obodo na nke mba ụwa site na mgbakwunye nke ịdị elu ya na-elekwasị anya na itinye ego gọọmentị nke ọma rụọ ọrụ nke ọma. .
Ọzọkwa, ịdị elu ya emeela atụmatụ mbụ nke gọọmentị Federal na UAE na Eprel 17 th, 2007, nke bụ ebumnuche iji nweta mmepe na nguzozi nke mba ahụ, na-eleba anya na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị etiti ma hụ na azịza ajụjụ n'ụzọ doro anya maka ihe oma obodo na ndi obodo ya.
Isi Iyi: https://www.cpc.gov.ae
Ọrụ nke UAE Vice President
Onye isi oche UAE na-arụ ọrụ niile nke onye isi ala UAE na ọnụnọ nke ikpeazụ maka ihe ọ bụla.
Akụkọ banyere ndu ya Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Na Jenụwarị 4th, 2006, Onye nwe ya Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ghọrọ Onye Ọchịchị nke Dubai mgbe ọnwụ nke Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum.
Kemgbe ghọrọ onye isi oche na Prime Minista nke UAE, yana Ọchịchị nke Dubai, E meela atụmatụ ihe ịtụnanya n'ụzọ dị ịtụnanya.
Afọ 2007 hụrụ ihe ngosipụta pụrụ iche nye sheikh Mohammed na mpaghara ma mpaghara. Na Eprel 17th, 2007, Sheikh Mohammed kpughere Atụmatụ Gọọmentị UAE na ebumnuche iji nweta mmepe na-adigide na mba ahụ niile, itinye ego gọọmentị n'ọrụ nke ọma ma hụ na ịrụsi ọrụ ike, ịza ajụjụ na nghọta n'ofe gọọmentị etiti.
Ebumnuche nke ntọala bụ ịkwalite mmepe nke mmadụ site na itinye ego na agụmakwụkwọ na mmepe nke ihe ọmụma na mpaghara site n'ịzụlite ndị isi n'ọdịnihu na mpaghara nkeonwe na nke ọha, na-akwalite nyocha sayensị, gbasaa ihe ọmụma, na-agba ndị isi azụmahịa ume, na-enye ndị ntorobịa ume, na-eme ka echiche nke ọdịbendị, ichebe ihe nketa na ịkwalite usoro nghọta dị n’etiti obodo dị iche iche.